ချစ်လိပ်ပြာ အချစ်စာပေ: လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၃)
လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၃)
ညတိုင်း အိပ်မရတာ မျိုးကျော်ပြန်သွားပြီး ကတည်းကပါ။ မိမိရဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာတခုလုံးကို ကျူးကျူးလွန်လွန် စော်စော်ကားကား လုပ်ခဲ့လို့ စိတ်ဆိုး ၀မ်းနည်း အရှက်ကြီးခဲ့ရပေမဲ့ ခုချိန်မှာ အဲဒီစိတ်တွေ ဘယ်မှာလိုက်ရှာရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး။ ငါရဲ့ သိက္ခာတွေ မာနတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီးလဲ တင်မိုးနိုင်ရယ်..။ ခုချိန်ထိ ဖင်ကိုရဲရဲမထိုင်ရဲသေးပါ။ မျိုးကျော်ရဲ့ ဒုတ်ကြီးက သူရဲ့ဖင်ကြားထဲကို အလိုက်သင့် ပူပူနွေးနွေးကြီး အမြောင်းလိုက် နေရာယူပြီး နောက်ကနေ ပင့်သက်ပြီး ကလိသွားတာ အူတွေကို ပျက်ကျမတတ်ပါပဲ။
အခုချိန်ပြန်တွေးမိတော့ သူအဲဒီလိုလုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ မိမိရဲ့ ဖင်ကို နောက်ပြန်ကော့ ပြန်တင်းခံပြီး တွန်းထားလိုက်ချင်မိတယ်။ ဟယ်.... ပြန်စဉ်းစားကြည့်တိုင်း ငါ့ရင်တွေ ခုန်လွန်းလို့ တစစီပြုတ်ထွက်ရပါတော့မယ် မျုိုးကျော်ရယ်။ သူ့လက်တွေကိုလည်း ကြည့်ပါအုန်း ငါရဲ့ နို့တွေကို ကိုင်ထားလိုက်တာနော် သေချာပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်တာများ အသက်ကို ဘယ်ကနေထွက်ရပါ့မလဲ မသိတော့ပါဘူး။ ငါ့မှာလေ ဒူးတွေမှာ အားကို လုံးဝမရှိတော့ ချိနဲ့နေတာ ပစ်တောင်လှဲခဲ့တာ နင်အသိပါ။ ငါ့ကိုငါ နင့်ကို စိတ်ဆိုးတယ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ခဲ့ပေမဲ့ ငါရှက်တာလေး တစ်ခုထဲပါ မျုိုးကျော်ရယ်။ ငါ့ကို ရှက်ခွင့်လေးတော့ ပေးပါဟယ်.. နင်သိပါတယ် ငါဘယ်ယောကျာ်းလေးနဲ့မှ ငါကို ဒီလိုမလုပ်ဖူးသလို ဘယ်ယောက်ျားကမှလည်း ဒီလိုမလုပ်ဝံ့တာ နင်သိပါတယ်။ ငါ့ဘ၀မှာ နင်တစ်ယောက်ထဲရယ်ပါ။ ငါစိတ်တွေ အခုယိုင်လဲနေပြီ မျိုးကျော်ရယ် လာကြည့်လှည့်စမ်းပါ။
ပါးစပ်ပြောချင်နေမိတယ် နင်ဒီလို ငါ့ကို မစို့မပို့လေးလုပ်သွားတာကို နင်ပြန်လာ တာဝန်ယူသင့်တယ်။ ဟုတ်တယ် ဒီလိုတွေးမိတော့ ငါ နင့်ကို တအားစိတ်တိုလာတယ်။ မိမိပေါင်ပေါ်တင်ထားတဲ့ ခေါင်းအုံးကို လက်ဝါးနဲ့ တအားရိုက်မိရင်း ... ငါတအားစိတ်တိုလာပြီ မျိုးကျော်ရယ်.. .. နင်ငါ့ကို ဖျက်စီးသွားတာပဲ ငါ့စိတ်တွေ ငါမာနတွေ ငါ့သိက္ခာတွေကို အကုန်ဖျက်စီးပြီး ယူသွားတာပဲ။ တယောက်ထဲ အသံထွက်ပြီး သက်ပြင်းတွေကော အံ့ကျိတ်ပြီး စိတ်တိုပစ်လိုက်တယ်။ စိတ်တိုနေတုန်း မိမိလက်တွေက ကိုယ့်ရဲ့ နို့တွေကို ဘယ်လိုကနေဘယ်လို စမ်းမိနေတယ်။ ကိုယ်လက်နဲ့ ကိုယ်ဆိုပေမဲ့ မျိုးကျော်ရဲ့ လက်တွေနဲ့ ကိုင်လိုက်တဲ့ အရသာနီးပါး ခံစားရလို့ သတိကရှိနေပေမဲ့ လက်ကမလွှတ်ချင်တော့ပဲ မျက်လုံးလေးကို စင်းပြီး သက်ပြင်းခပ်ယဲ့ယဲ့လေးကိုချပြီး နို့လေးကို ခြေနေမိတယ်။
မျိုးကျော်ရယ် ငါ့ကိုလာကြည့်ပါအုန်းဟယ်... ငါ့စိတ်တွေ ငါ ရဲ့စိတ်တွေလေ... အိုး... ငါ့ရဲ့ စိတ်တွေတင်မကပါဘူး ငါရဲ့ မာနတွေပါ နင့်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ချင်တဲ့ စိတ်တွေပေါက်လာပြီဟယ်.. ငါ့ကို တချက်လောက်ပြန်ကြည့်ပါလာ။ တောင်းပန်တယ်ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ် ခဏလောက်လေးငါ့ဆီကို လာခဲ့ပါလားဟယ်။ ရှေ့တုန်းက စကားတွေလို “ခြေရင်း အလုပ်အကြွေး ပြုဖို့ မောင်တော့်ထံပါး ခစားပါရစေ” လို့ ငါမာနတွေချ ငါ့ရဲ့ခေါင်းကို ကြမ်းနဲ့ တစ်ညီထဲ ထားလိုက်ချင်ပါတော့တယ် မျိုးကျော်ရယ်။
မိမိရဲ့ အင်္ကျီထဲ လက်နှိုက်ပြီး နို့လေးကို ပွတ်သပ်လူးလှိမ့်နေတုန်း အိပ်ယာဘေးမှာ မှန်တင်ခုံကို သတိထားမိတော့ ... အိပ်ယာက ဆက်ကနဲ့ ထထိုင်မိပြီး စိတ်ကူးတခုကို ပျင်းရိလေးပင်စွာ တွေးမိတယ်။ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါဆိုတာ ဒါမျိုးလားဟယ် ... ကောက်ကနဲ့ ထပြီး မိမိရဲ့ အလှပြင်မှန်တင်ခုံ ရှေ့ကိုတောင် ရောက်နေတယ်။
သက်ပြင်းခပ် သဲ့သဲ့လေးကို ညင်သာစွာချရင်း အပေါ်ည၀တ်အကျီကို ဖြည်းညင်း ညင်သာစွာချွတ်လိုက်တယ်။ နောက် ည၀တ် ထမီလေးကိုပါ ချွတ်လိုက်တယ်... ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာ ဘော်လီလေး ရှိနေပေမဲ့ ... အောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘာမှမရှိတော့ပဲ။ မိမိရဲ့ ပစ္စည်လေးကို ရေးရေးလေး မြင်နေရပြီလေ။ မထူတော့ပြီမို့ ဘော်လီလေးပါ ထပ်ချွတ်လိုက်တော့ အမေမွေးတုန်းက အတိုင်းပဲ ရှိတော့တယ်.. ငါဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ တင်မိုးနိုင်။ ငါသိတတ်ပြီဆိုထဲက ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ လုံလုံခြုံခြုံနေလာခဲ့တာ။ ဒါငါစိတ်နဲ့ငါ အရှက်အကုန်ပဲ မျိုးကျော်ရယ် ...
ငါရဲ့အသက်အရွယ် ရင့်ကျက်မှုတွေက ဘယ်မှာလဲ။ ငါသင်ခဲ့တဲ့ ပညာတွေက ဘယ်မှာလဲ ... တင်မိုးနိုင် နင်ဟာ သောက်သုံးမကျတဲ့ သူတယောက်ဆိုတာကော သိလား .... ငါ့စိတ်တွေ ဘာတွေလဲ ဘာတွေပြောနေတာလဲ ဘာတွေအတွေးတွေရောက်နေတာလဲ ..... အိုးးးးး... ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စမ်းပါ... မှန်တင်ခုံကို အသားငေးကြည့်နေပြီးမှ စိတ်ထဲ လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခု ပေါ်လာတယ်။
မိမိရဲ့ စိတ်ကပဲ မြန်တာလားပဲ မှန်တင်ခုံကို ကုတင်နဲ့ နီးအောင် ရွေ့လိုက်တယ်။ သိပ်အလေးကြီး မဟုတ်လို့တော်သေးတယ်။ ကုတင်နဲ့ နီးနိုင်သမျှနီးအောင် ထားလိုက်တယ်။ မှန်ကြီးက အကြီးကြီးပါ လူသုံးယောက် ကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရတယ်။ ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တယ်။ ဆေးရုံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မိမိရဲ့ အ၀တ်စားမဲ့ပြီး လှဲလျောင်းနေတဲ့ ကိုယ်ကို မှန်ထဲမှာ မြင်ချင်လို့ပါ။ မှန်ကို ကုတင်ပေါ်မှာ သေချာမြင်ရအောင် ချိန်လိုက်တယ်။ ကုတင်ပေါ်ပြန်လှဲနေလိုက်တော့ မိမိရဲ့ ကိုယ်ကို အပြည့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီး မြင်နေရတော့တယ်။ မှန်ကို ခြေရင်းပြုပြီး စေ့ထားတဲ့ ခြေထောက်တွေကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း အသာကားလိုက်တော့ မိမိရဲ့ ပစ္စည်လေးက ဘွားကနဲ့ ဟဟလေးပေါ်လာတယ်။
မျိုးကျော်ရယ် ... နင် ဒီလိုမြင်လိုက်လို့ နင့်စိတ်တွေ အရိုင်းစိုင်းစိတ်တွေ ၀င်လာရတာ ဒါကြောင့်လားဟယ်။ ပေါင်ကို ထပ်ကားလိုက်တော့ မှန်ထဲကနေ အရှင်းဆုံး မြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရတော့ မိမိလက်ကလေးနဲ့ အသာစမ်းလိုက်မိတယ်။ လူကို တွန့်ကနဲ့ ဖြစ်သွားတယ်။ ခေါင်လေးထောင်ပြီး မှန်ကို ပြန်ကြည့်မိတယ်။ ဟယ်.. ငါ့အဖြစ်က တော်တော်ဆိုးနေပါလား ပေါင်ကြီးကားထားလို့ မြင်နေရတဲ့ မျက်နာက ငါ့မျက်နာမှ ဟုတ်ပါရဲ့လား။ သူများတွေပြောတဲ့ ယောကျာ်းတွေ မိန်းမတွေကို လုပ်ရင် ဒီလိုပေါင်ကားထားရတာပဲတဲ့ ... တကယ်လို့များ မျိုးကျော် င့ါကို လုပ်ခဲ့ရင် ငါဒီလို ပေါင်ကားထားရမှာပဲ။
အိုးး... တွေးလိုက်တာနဲ့ ကိုအသည်းထဲမှာ ဆစ်ကနဲ့ ယားတက်သွားတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်သွားတာကို သာယာတဲ့ စိတ်ကဖြစ်လာတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုကို မိမိပြန်ပြုံးမိနေတယ်။ မျိုးကျော်ရဲ့ မျက်နာလေးကို မြင်ယောင် ... မျိုးကျော် မိမိကိုတက်လုပ်နေတယ် .... အသိလေးစိတ်သွင်းပြီး မိမိရဲ့ ပစ္စည်လေးကို ဘယ်လက်လေးနဲ့ အသားဖြဲ ညာလက်ညှိုးလေးနဲ့ အစိလေးကို ခပ်မြန်မြန်လေး ပွတ်သပ် လိုက်မိတယ်။ အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ အရသာကို တချက်တချက် ထစ်ကနဲ ထစ်ကနဲ ရလိုက်တယ်။ ပစ္စည်းထဲမှ အရည်တွေမှာလည်း ဆီးခုံထိတောင် ရောက်နေသလား အောက်မေ့ရအောင် အရမ်းကို ထွက်နေသလို လက်ညောင်းပေမဲ့ ပွတ်သပ်နေရတာ အရမ်းကို အဆင်ပြေလာတယ်။ ဟုတ်ပြီ ... နောက်ထပ် ခပ်မြန်မြန်လေး ပါးစပ်ကလည်း ဘယ်လိုကနေဘဘယ်လို ...
“မျိုးကျော်ရယ် ... ငါ့ကို လုပ်ပါတော့ဟယ်...မျိုးကျော် မျိုးကျော်.. အားး... အူးးး...၀ူးးး...”
မျိုးကျော်ကို တမ်းတပြီး အသံထွက် ခေါ်နေရတဲ့ အထိ အသားကုန် ပွတ်ပေးလိုက်ရာ ခါးလေးမှာလည်း ကော့တက် တချက်ချက် ကောင်းလွန်းပြီး ယားတက်လာတဲ့ ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့ ပေါင်ပင်မကားနိုင်ပဲ ဆန့်ထုတ်ဖြောင့်တန်းထားတဲ့ ခြေထောက်တွေလဲ ပြန်စေ့ပြီး ကွေးကွေးသွားတော့တယ်။ နောက်ဆုံး စိတ်တွေကို မထိန်းချင်တော့ပဲ အားကုန်မီးကုန် စိတ်ထဲနှစ်ပြီး ပွတ်သပ်လိုက်တာမှာတော့ မိမိ ပစ္စည်းနားကလား ဗိုက်နားကလား ရင်ထဲကလားမသိတဲ့ တချက်ခြင်း တဒိန်းဒိန်းနဲ့ ခုန်နေတဲ့ အသံတွေနဲ့အတူ လူလည်း ပျော့ခွေဆင်းကျလို့ သွားပါတော့တယ်။
ဇင် ပြန်သွားပြီးကတည်းက ဇင်နဲ့ အဆက်သွယ်မရတာ နှစ်ရက်ရှိနေပြီ။ အိမ်ဖုန်းကော ဟမ်းဖုန်းနံပါတ်ကော နုစ်ခုလုံးပေးထားတာတောင် မခေါ်ဘူး။ သူအရင် ပန်းရောင်းနေတဲ့ ဒဂုန်စင်တာရှေ့ကို မနက်အလုပ်သွားရော အလုပ်ပြန်ပါ သွားရှာပြီးပြီ ဇင့်ကို မတွေ့သလို သူ့အဒေါ်ဆိုတာကိုလည်း မတွေ့။ ပန်းသည်တွေ မေးကြည့်တော့လည်း လူကို အကြည့်ပေါင်းစုံနဲ့ ကြည့်ပြီး မပြောချင် ပြောချင်နဲ့။ သူတို့နေတာ စမ်းချောင်းမှာဆိုတာပဲ သိခဲ့ရတယ်။ အတူတူနေပြီးခါမှ ရုတ်တရက်ကြီး မဆက်သွယ်လာတော့ ရင်ထဲမှာ တမျိုးကြီးပဲ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း ဖုန်းကိုတကြည့်ကြည့်နဲ့ ..
ရေချိုးတော့လည်းဖုန်းကို ရေချိုးခန်းထဲထိ ယူလာမိတယ်။ သူများတကယ်လို့ ခေါ်လာခဲ့ရင် ပေါ့။ ည၈နာရီထိုးတော့ ခြံစောင့်ကြီးရောက်လာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဆိုင်က၀ယ်လာတဲ့ ထမင်းချိုင့်ကို ထမင်းစားပွဲမှာ တင်ခဲ့ပြီး နောက်ဖေးက ဂိုးဒေါင်မှာ သွားအိပ်ပြီ။ စကားလေး တခွန်တောင်ပြောမသွားဘူး။
ခြံစောင့်လုပ်လာတာ ကြာပြီဆိုပေမဲ့ ညညသူရှိတယ်ဆိုတာ မေ့တောင်နေတယ်။ မနက်ကြတော့လည်း ဖုတ်ဖက်ခါပြီး ထွက်သွားတာ ကိုယ့်တောင်မသိဘူး။ အိမ်မှာ အဖေနဲ့ အမေမရှိကတည်းက အိမ်ဖော်လဲ ခေါ်မထား ခြံစောင့်ကိုလည်း အချိန်ပြည့်ခေါ်မထားတာ ကျွန်တော့်ကြောင့်ပါပဲ။
လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေချင်တာနဲ့ပဲ အာချောင်လိုက်တာလေ။ ထမင်းစားပွဲပေါ်က ထမင်းချိုင့်ကို ဖွင့်ကြည့်ပြီး စားမယ်အလုပ် စိတ်ကဖုန်းဆီကိုပဲ ရောက်နေတာမို့ ထမင်းစားပွဲမှာ ငုပ်တုပ်ထိုင်ပြီး ဇင့်အကြောင်းတွေနေတုန်း အိမ်ဖုန်း Ring မြည်လာတယ်။ ၀မ်းသာအားရ မပြေးရုံတမယ် ပြေးကိုင်လိုက်တယ်။
ဇင် မဟုတ် သူငယ်ချင်းဖြစ်နေတယ်။ သူငယ်ချင်းပြောနေတဲ့ စကားကို သိပ်အာရုံမရသလို ဇင်များဖုန်းခေါ်ခဲ့ ရင် သူငယ်ချင်းဖုန်း ၀င်နေတာနဲ့ မရမှာစိုးရိမ်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းကို မနည်းစကား ဖြတ်လိုက်ရတယ်။ သူငယ်ချင်းဖုန်းကျ သွားပြီး စိတ်ပျက်လက်ပျက် ထမင်းစားပွဲသွား ပြန်ထိုင်မယ် အလုပ်မှာ ...
ကျွန်တော့် ဟမ်းဖုန်းမှ Ring မြည်လာလို့ ဖုန်းကိုင်လိုက်တော့.. “ကိုကြီး လား” တဲ့ ရင်ထဲ ထခုန်မတက်ပျော်သွားတော့တယ်...
“ဇင်ရယ် ကိုကြီးပြောထားရက်နဲ့ အရင်နေ့တွေက ဘာလို့ဖုန်းမခေါ်တာလဲ ... ကိုကြီးဖုန်းစောင့်နေတာ ဇင်ပြန်သွားပြီးကတည်းက ဒဂုံစင်တာရှေ့လည်း ရောက်တယ် ဇင် စမ်းချောင်းမှာနေတယ် ဆိုလို့ အဲဒီနားမှာ ဇင့်ကိုများတွေ့မလားလို့ လိုက်ရှာမိသေးတယ် .. ဇင် ရယ် ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ ကိုကြီးကို ”
“ကိုကြီး ဇင် ပြောတာနားထောင်ပါအုန်း စွတ်လွှတ်နေတော့တာပဲ.... တကယ်ပဲ..”
“ကဲ ပြောပါဗျာ ပြောပါ..”
“ဇင့် မေမေ နေမကောင်ဘူး အရမ်းကို ဖျားနေတာ ... ကိုကြီးဆီ လာချင်ပေမဲ့ မကောင်းဘူးလေ မေမေ့ကို ပစ်ထားသလို ဖြစ်နေမှာပေါ့ ”
“ဟုတ်ပြီ .... ဒါဆို ဇင့် မေမေကော ဇင့် အိမ်ကော ကိုကြီး ခဏလောက်လာကြည့်ချင်တယ်... ”
“ဘာလို့ မလာရဲရမလဲ ... ခုတောင်လာချင်တယ်...”
“ဟာ .. ခုတော့မလာပါနဲ့ ... ဟုတ်ပြီ... ဒါဆို မနက်ဖြန် ၁၀ နာရီ လာခဲ့ပါ.... အယ် ..မေ့လို့ ကိုကြီး အလုပ်ဆင်းရအုန်းမယ်... မှတ်..”
“ဟိုးထား.... အလုပ်တွေ ဘာတွေ ဘာမှ မပြောနဲ့ အဲဒီအလုပ်က မလုပ်လည်းရတယ် ဇင်သာ အရေးကြီးတာ... ”
“အင်းလေ.. ဒါဆို ကိုကြီးလာမယ် ဆို ဇင်ပြောသလိုလာရမယ်....”
“ပြောစေဗျာ ဘယ်လိုလာရမလဲ .. သခင်မ စိတ်တိုင်းကျပါပဲ.... ဟီးဟီး...”
“ကိုကြီး အကောင်းပြောနေတာနော်... ကိုကြီးလာမယ် ဆိုရင် ..တစ်... ကိုကြီးရဲ့ ကားကြီးကို ယူမလာနဲ့ တိုင်စီနဲ့ ပဲ လာ....”
“အမ် ဘာလို့လဲ.... ဇင် ရဲ့ ”
“ပြောသလိုသာ လုပ်ပါ ကိုကြီးရာ ... ကိုကြီးရဲ့ ကားကြီးနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲဝင်လာရင် လူတွေလန့်ကုန်မယ်... နဂိုကမှ တောင်ပြော မြောက်ပြောနဲ့...”
“အော် ဟုတ်ပြီ... တိုင်စီနဲ့ လာမယ်.. နောက်တော့ကော ခင်ညာ...”
“၀တ်နေကျ ဘောင်ဘီအရှည်နဲ့ လာရဘူး ... သာမန် ပုဆိုးနဲ့ ရိုးရိုးအကျီနဲ့ လာရမယ်.... ”
“မင်းသိင်္ခ ၀တ္ထုဖတ်နေရသလိုပဲ လျှိုဝှက် နက်နဲတယ် ... ခက်ခဲတယ် ဆိုသလိုပဲ ...ဟီးဟီး... ”
“အာာာာာ .. ကိုကြီးဒီရောက်ရင် သိမယ် ဘာလို့လဲ ဆိုတာ...”
“ဟုတ်ပါပြီ ဇင်ရယ်.. အမိန့်တော်မြတ်အတိုင်းပါပဲ... ”
“အယ်...နေအုန်းလေ နေအုန်း လိပ်စာပေးအုန်း..လေ ဇင်ရယ်...လိပ်စာမရှိရင် ဆားပုလင်းနှင်းမောင် ဒုက္ခတွေတော့ ရောက်တော့မှာပဲ .”
ဇင် ပြောတဲ့ ဇင့်လိပ်စာကို သေချာမှတ်ထားလိုက်တယ်။ ဇင် ဖုန်းချသွားတော့မှ ရင်ထဲ အလုံးကြီးကျသွားတော့တယ်။ ဇင့် အိမ်ကိုသွားရတော့မယ် ဆိုတော့ တအားပျော်နေသလို မနက်ကို မြန်မြန်ရောက်ချင် နေပါတော့တယ်။
ဇင်ပေးထားတဲ့ အိမ်နံပါတ် လိပ်စာအတိုင်း ဇင့်အိမ်ရှေ့သို့ ချောချောမောမော ရောက်လာတယ်။ သာမာန်ရပ်ကွက်လေးမို့ထင်တယ် ဇင့်အိမ်လေးက ခပ်သေးသေးရယ်ပါ။ ဇင့်ကိုရင်ထဲက သနားမိတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်လည်း ပြန်ကြည့်မိတယ် ခုမှ တကယ့်ကို ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားနဲ့ တူတော့တယ်။
ဇင်ပြောထားတဲ့ အတိုင်း ပုဆိုးတပတ်ရစ်ကလေးရယ် ရိုးရိုးအကျီလေးကို ၀တ်လာခဲ့တယ်လေ။ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာလဲ ဇင့် မေမေအတွက် ဆေးတွေလူကြီးအသုံးအဆောင်တွေ တနင့်တပိုးနဲ့ ဇင့် အိမ်ကိုတချက်လှမ်းကြည့် ခြံထဲဝင်မယ်ဆိုပြီး ခြံတံခါးကို တွန်းအဖွင့် ဇင် ပြေးဆင်းလာတယ်။
“ဟယ်.... ကိုကြီးလာပြီ... အထဲ ၀င်ရအောင် ကိုကြီး... ဟင်... ဒါတွေက ဘာတွေလဲ ဒါတွေဝယ်ခဲ့ရမယ်လို့ မပြောပါဘူး..”
“ကိုကြီး ဇင့်ကို တအားလွမ်းနေတာ.. ဇင်ရယ်..”
သူမေးတာ ပြန်မဖြေပဲ ဇင့်ကို နားနားကပ် တိုးတိုးလေ ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး...
“အိမ်ပေါ်မှာ ညီမလေးနဲ့ ဧည့်သည်တွေ ရှိတယ် .. ဘယ်လို ဖြစ်နေတာလဲ..”
အသာလေး မျက်နှာပိုးသတ်ပြီး ဇင့် နောက်ကနေ အိမ်ထဲလိုက်ဝင်လိုက်တယ်။ ဧည့်ခန်းဆိုပေမဲ့ ဘာခုံတစ်လုံးမှ မရှိပါ။ ဇင့် မေမေဖြစ်ဟန်တူသော လူမမာတစ်ယောက် စောင်ခြုံလျက်လှဲနေတယ်။ ဘေးနားမှာလည်း အသက် ၁၃ နှစ် ၁၄ နှစ်လောက်ရှိမယ့် ဇင့် ညီမလေးဖြစ်ဟန်တူတဲ့ ကောင်မလေးက လူမမာကို နှိပ်နယ်ပေးနေသလို ဧည့်သည်ဆိုသော အမျိုးသမီးကြီးကတော့ လူမမာကို ဘာတွေပြောနေတုန်း မသိဘူး။
ဇင်က သူ့အမေ နားသွားထိုင်တော့ ကျွန်တော့်ကို လက်ယပ်ခေါ်တာနဲ့ ဇင့်နားမှာ ၀င်ထိုင်ပြီး ၀ယ်လာတဲ့ အထုပ်တွေကို လူမမာဘေးနားမှာ ချထားလိုက်တယ်။ နောက် ဇင်ကပဲ....
“အမေ ဒါ သမီးတို့ ထီရောင်းတဲ့အဖွဲ့က ကိုယ်စလှယ်ပဲ .. ”
ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပြီ ဘာမှပြန်မပြောပဲ ဟုတ်မှန်ကြောင်း အသာခေါင်းငြိမ့်နေလိုက်တယ်.... အော် နေရင်းထိုင်ရင် ထီရောင်းရတဲ့ ဘ၀တောင်ရောက်သွားပါလားလို့ ... ဇင်ပဲ ဆက်ပြောနေတယ်...
“အလုပ်တူတူ လုပ်တာပေါ့ နာမည်က .......”
သူ တစ်ချက်စဉ်းစားနေတယ် ကျွန်တော့်နာမည်ကို ..ဟာ.. ဟုတ်သားပဲ ကျွန်တော့်နာမည်ကို သူမှမသိသေးတာ ပြောလည်းမပြောထားမိဘူး.. အခက်တွေ့တော့မှာပဲ အထင်နဲ့ ဇင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ဇင် ကတကယ် ပါးနပ်တဲ့ မိန်းကလေးပါ...
“ .. ကိုနေမင်းပါ...သမီးတို့နဲ့ အတူတူ အလုပ်လုပ်တာလေ....”
“ဟုတ်ပါတယ်.. ခင်ဗျာ ဆိုင်မှာတော့ အားလုံးက ချစ်စနိုးနဲ့ ကိုနေမင်းလို့ခေါ်ပါတယ် .. နာမည်အရင်းကတော့ မျိုးကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်... ဒီမှာ အန်တီအတွက်ဆေးတွေ ၀ယ်လာပါတယ် အန်တီနေမကောင်းဘူးဆိုလို့ ”
ကျွန်တော့်နာမည် မျိုးကျော်လို့ ပြောတဲ့အချိန်မှာ ဇင့်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ ဇင်ပြုံးနေသလို ဧည်သည်မိန်းမကြီးက ကျွန်တော့်ကို အသက်မပါတဲ့ အပြုံးလားမသိပါဘူး။ သေချာစေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်ပြီး ပြန်ပြုံးပြနေတယ်။ သူအမေကတော့ အိပ်ယာထဲကပဲ ရောဂါသည်မျက်နာနဲ့....
“အေးကွယ် မောင်နေမင်း အဲ... မောင်မျိုးကျော် အားနာစရာကြီးကွယ် ..၀ယ်လာတာတွေကို ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကွယ်.. အန်တီ့သမီးလေးကိုလည်း ကြည့်ရူ့ပေးပါအုန်းကွယ် နော်... ဧည့်သည်ကို ဒီအတိုင်းဧည့်ခံရတာ အားနာလိုက်တာ....”
“ရပါတယ် အန်တီရယ်... အားနာစရာမလိုပါဘူး ...လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် မောင်နှမတွေရဲ့ လိုအပ်နေတာလေးတွေ ဒီလိုပဲ ကူညီရပေါ့... ”
“ကဲ... ကိုကြီး ဗိုက်ဆာရောပေါ့ လာ မီးဖိုချောင်မှာ ဒီနေ့ ကိုကြီးပြောတဲ့ ငါးကလေးအိုးကပ် ချက်ထားတယ်... လာသွားစားမယ်...”
“ညီမလေး ကိုကြီး မစားတော့ဘူးလေ စားလာခဲ့ပြီးပြီ...”
“လာပါ ....ကိုကြီးကလည်း ရှက်နေပြန်ပြီ ... ဘာမှ အားနာစရာမလို့ဘူး ကိုယ့်ညီမအိမ်ပဲ...”
ဇင် ကျွန်တော့်ကို အတင်းခေါ်လို့နေပြီ ဒီအချိန်ကြီး မစားတတ်သလို သူများအိမ်မှာ ထမင်းလည်း မစားချင်ပါ .. ငါးကလေး အိုးကပ်ဆိုတာလည်း မကြိုက်သလို ဇင့် ကိုလည်း ပြောမထားပါ။ တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ။ အတင်းဆွဲခေါ်နေတာနဲ့ ဇင့် မေမေကို တစ်ချက်ပြုံးပြပြီး ဇင် ခေါ်ရာ မီးဖိုချောင် ထမင်းဝိုင်းကို လိုက်သွားတော့တယ်။
မီးဖိုဂျောင်ရှိ ထမင်းစားပွဲရောက်တော့ ဇင်က ထမင်းဝိုင်းက အုပ်ဆောင်းလေးကို ဖွင့်ပြီး ဟင်းတွေ ထမင်းပန်းကန်ထဲ ခူးခပ်ထည့်နေလေပြီ။ ကျွန်တော်တကယ် မစားချင်တာကြောင့် မျက်နှာလေး.. မဲ့ ဇင့်နားကပ်ပြီး..
“ဇင် ကိုကြီး မစားချင်ဘူး... တကယ်ကို မဆာလို့ပါ..”
“ကိုကြီးကို ဘယ်သူက ထမင်းကျွေးမယ် ပြောလို့လဲ.. ကိုကြီး မစားချင်တာ သိသားပဲ.....”
“ကိုကြီးစားချင်တာ ဇင် ကျွေးမယ်လေ...”
ဆိုပြီး ဘာမပြောညာမပြော ကျွန်တော့ကို ဖက်ပြီး ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကို နမ်းပါတော့တယ်။ လူလည်း ရုတ်တရက်မို့ တချက်ကြောင်သွားတယ် အလိုက်သင့် သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်နမ်းနေပေမဲ့ စိတ်ကတော့ ဧည့်ခန်းက ဇင့် မေမေက မထလာနိုင်လို့ အကြောင်းမရှိပေမဲ့ ဧည့်သည် အဒေါ်ကြီးနဲ့ ဇင့် ညီမလေးဆိုတာကို စိတ်ရောက်နေတယ်။ တော်ကြာ သူတို့ မီးဖိုချောင်က ထမင်းဝိုင်းနားလာကြည့်မှ ရှုပ်ကုန်တော့မှာပဲလို့ တွေးကြောက်နေတာမို့ ဇင့်ကို...
“ဇင်ရယ် ဟိုအဒေါ်ကြီးနဲ့ ဇင့် ညီမလေးလာကြည့်မှဖြင့်....”
ကျွန်တော်ဆက်မပြောနိုင်ပါ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကို အတင်းနမ်းလို့နေတယ်။ ဇင့် ရဲ့ အနမ်းတွေက တကယ်ကို အသက်ဝင်လှပါတယ်.. ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတဲ့ ကလေးလေး တစ်ယောက်လိုပါပဲ. နမ်းနေတုန်း ဇင် ကျွန်တော့်ကိုခွာပြီး မီးဖိုချောင်နဲ့ ဧည့်ခန်းနံရံကို ကုန်းပြီးဘာလုပ်နေလဲ မသိဘူး...
“ရှုးးး... တိုးတိုး... ဒီအပေါက်လေးကနေ ဧည့်ခန်းကို လှမ်းချောင်လို့ရတယ်.. ကဲ ကိုကြီး အချိန်မရဘူး.. ဟီးဟီးး. ဇင်လေ ကိုကြီးကို တအားလွမ်းနေတာ ...”
ဇင် ရယ်လျက် ကျွန်တော့်ကို နမ်းသလို ကျွန်တော့်ဒုတ်ကိုပါ လှမ်းကိုင်တာ ... ချက်ချင်းဆိုသလို ဒုတ်က ထလာပါတော့တယ်။ နောက် ကျွန်တော့်ပုဆိုးကို အထက်ကိုလှန် အောက်ခံဘောင်းဘီလေးအား အောက်ကို အနည်းငယ်ဆွဲချပြီး ဒုတ်ကိုထုတ် ဂွင်းတိုက်လို့ပေးနေတယ်။ ၂ ရက်တောင်နားထားတဲ့ ဒုတ်ဟာ ဇင့်လက်လေးနဲ့ ထိပြန်တော့ ကြီးသထက်ကြီးလာလို့နေတယ်။ နောက် ဇင်က ဟိုအပေါက်လေးမှ ဧည့်ခန်းကို ဖင်ကုန်းပြီး ချောင်းကြည့်ရင်း သူ့ထမီကို အထက်ကိုလှန်လိုက်တာမှာအောက်မှာ ဘာမှ မ၀တ်ထားတော့ ၀င်းပြီးကားနေတဲ့ ဇင်ရဲ့တင်သားကြီးတွေနဲ့ အတူ ရွှေခရုလေးကလည်း စူထွက်ပြီးပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော်ခုမှပဲ သဘောပေါက်တော့တယ်။ ဒါကြောင့် ဇင် ကျွန်တော့်ကို ပုဆိုးဝတ်လာဖို့ပြောတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သိလိုက်ရတော့တယ်။
ဇင့် လက်ချောင်းကလေးတွေက သူ့ ရွှေခရုလေးကို အောက်ကနေ ပွတ်သပ်လို့ နေတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဘယ်လို့မှ ထိန်းမရတော့ဘူးလေ ဇင့် ကုန်းပေးထားတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော့် ဒူးထောက်ထိုင်းပြီး ဇင့် တင်ပါးလေးကို ကိုင်လျက် ဇင့် ရွှေခရုလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ညင်သာစွာ လျှာနဲ့လျက်ကလိပေးလိုက်တယ်... ဇင့်ဆီက အသံသဲ့သဲလေးကြားလိုက်ရတယ်။ ဇင်မှာ အရှေ့တွင်ချောင်းနေရင်းတန်းလန်း မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ လှည့်ကြည့်ပြီး ...
“ကိုကြီးရာ လုပ်တော့တာ မဟုတ်ဘူး... ”
တိုးတိုးလေးပြောလာလို့ အချိန်မဆွဲတော့ပဲ ခပ်မြန်မြန်ပဲ မတ်တပ်ထ ဇင့်ရွှေခရုလေးထဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတ်ကိုတေ့ပြီး ဆောင့်ထည့်လိုက်တယ်။ ဇင် မထင်မှတ်ပဲခံလိုက်ရလို့ ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကို နောက်ပြန်လှမ်းတွန်းကာရင်း အစွမ်းကုန် ကျယ်ဟထားတဲ့ပါးစပ်နဲ့အတူ မျက်စိမနက်နှာပျက် ငိုတော့မယ် ပုံနှင့်...
“အာာာာာ.....ဖြည်းဖြည်းခြင်း လုပ်တာမဟုတ်ဘူး သေတော့မှာပဲ ... ”
ဇင် ပြောတာ အသံလုံးဝမထွက်ပေမဲ့ သူဘာပြောလိုက်တယ် ဆိုတာကိုတော့ သိလိုက်တယ်။ အရမ်းကို အရသာရှိလိုက်တာ ကိုယ့်ရဲ့ ဒုတ်တချောင်းလုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် သူ့ထဲရောက်နေတာကို အပေါ်က မိန့်မိန့်ကြီး ကြည့်နေရင်း ညင်သာစွာ တချက်ခြင်း မှန်မှန်လေး ဆောင့်ထည့်လိုက်တယ်။ ဇင်လည်း ဘယ်ထဲက ခံချင်နေလဲမသိ ချက်ခြင်းဆိုသလို ကျွန်တော့ ဒုတ်--စ် ကျန်ရုံလေးပြန်ဆွဲထုတ်တိုင်းမှာ သူ့ရွှေခရုလေးတွင်သာမက ကျွန်တော့်ရဲ့ဒုတ်ပေါ်တွင် ဇင့် ဆီက ဖြူဖျော့ဖျော့အဆီလေးတပုံကြီး ကပ်ပါလာတယ်။ ထိုးထည့်ရင်းတန်းလန်းကြည့်ကောင်းနေတုန်း ဇင့် လက်တွေက ကျွန်တော့်တင်ပါး နှစ်ဖက်လုံးကို နောက်ပြန်ကိုင်ရင်း....
“ခပ်မြန်မြန် ဆောင့်တော့ ကိုကြီး ..”
ဇင် ပြောသလို ကျွန်တော်လည်း တအားနဲ့ ဆောင့်ထည့်ချင်နေတာနဲ့ အားနဲ့ ဆောင့်ထည့်လိုက်တော့ ဇင့်တင်ပါးနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီးခုံရိုက်သံက အသံနည်းနည်းကျယ်သွားလို့ ပြန်ထိန်းပြီး ဆောင့်နေလိုက်တယ်။ ဆောင့်နေရင်းတန်းလန်း စူးစမ်းချင်တဲ့ စိတ်ကတားမရတာလားမသိ။ ဇင် သတိမထားမိခင် ဇင့်ရွှေခရုလေးထဲ ထည့်နေတဲ့ ကျွန်တော့ဒုတ်ကို အကုန်ပြန်ထုတ်ပြီး ဇင့် ရွှေခရုလေးကို ကုန်းကြည့်လိုက်တယ် ...ဒုတ်တချောင်းလုံးလောလော လတ်လတ် ထွက်သွားလို့ နေရာလွတ်ပြီး ဟာလာဟင်းလင်းကြီးမှာ လက်မတစ်ချောင်းစာလောက်ရှိပြီး အခေါင်းပေါက်အတွင်း နီတွတ်ပြီး နုနယ်တဲ့ အသားထစ်ထစ်တွေကို တစ်ဆုံးထိတောင် မြင်နေရသလိုပင် .... ဇင် ရိပ်မိသွားတယ်။ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီး စိတ်ဆိုးတဲ့ အမူယာနဲ့....
“ဘာလုပ်တာလဲ ဘာလုပ်နေတာလဲ... ဟာ..ဟာ.... လုပ်တာမဟုတ်ဘူး...”
ဇင့်ခမျာ အသံလည်းမထွက်ရဲရှာပါဘူး လေသံလေးနဲ့သာ ပြောရှာတယ်။ ဒုတ်ကို အမြန်ကောက်တပ်ပြီး ၁၀ချက်လောက် အသံလည်းမထွက်အောင် ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ချနေတုန်း ဇင် ရုတ်တရက် မက်တပ်ရပ် ကျွန်တော့ဒုတ်လေးကို ဖြုတ်ရင်း မျက်စိမျက်နှာပျက်လျက် ကျွန်တော့်ကိုယ်ကို တွန်းထုတ်ကာ...
“ဟို အန်တီကြီးလာနေတယ် ခုံမှာထိုင်နေ.. ထမင်းစားနေလိုက် ...”
ကျွန်တော်လည်း အတော်လန့်ဖျန့်သွားတယ်။ ချွေးတွေကလည်း ပြန်နေတယ်။ ချက်ခြင်းဆိုသလို ထမင်းဝိုင်းက ခုံမှာ ထိုင်ပြီး ဇင် အဆင်သင့်ခူးပြီးသာ ထမင်းပန်းကန်ထဲမှာ
ထမင်းနဲ့ ဟင်းကို ဇွန်းနဲ့စားနေလိုက်တယ်။ ဇင်က ယပ်တောင်လေးနဲ့ ယပ်ခတ်ပေးနေရင် ..
“ကိုကြီးစားနော် ဘာမှအားမနာနဲ့... ထည့်စားလေ .... ကိုကြီးကြိုက်တတ်တဲ့ ငါးကလေးအိုးကပ်.. ငါးပိရည်လေးလည်း တို့စရာနဲ့ တိုးစားလေ ..”
ဟို အန်တီကြီး မီးဖိုချောင်သို့ ၀င်လာပါပြီ။ ခါးလေးကို လက်ကလည်း ထောက်လျက် အသက်ကြီးတဲ့လူတွေ ထုံးစံအတိုင်း ထော့နင်းထော့နင်းနဲ့ ..
“ဇင်ဇင်စိုးရေ အန်တီ့ကို သောက်ရေအေးအေးလေး တစ်ခွက်လောက်ပေးစမ်းပါအေ.... ”
ဟုပြောပြီး ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ ထမင်းဝိုင်းရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံမှာ ၀င်ထိုင်နေတယ်..ဇင် အမြန်ပဲ ရေအိုးထဲမှ ရေတစ်ခွက်ကို ခပ်ပေးပြီး တိုက်လိုက်တယ်။ ရေသောက်ပြီး သက်ပြင်းလေးချရင်း ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး ပြုံးပြတော့ ကျွန်တော်လည်း မျက်နှာမှ ချွေးတွေနဲ့အတူ ပြုံးပြလိုက်တယ်....
“ဟယ်... ဧည့်သည်က အစပ်မစားနိုင်ဘူးထင်တယ် စပ်လို့ချွေးတွေတောင်ပြန်နေတယ်.. ”
ရယ်ရယ်မောရယ်နှင့် သူတို့လူကြီးတွေ ဘယ်လိုကျမ္မာရေး အသက်ကြီးရင် မကောင်းတော့တဲ့အကြောင်း အလာပသလာပတွေပြောပြီး ထော့နင်းထော့နင်းနဲ့ ဧည့်ခန်းထဲကို ပြန်သွားတော့တယ်။ ကျွန်တော်ထမင်းကို ဆက်စားမိနေတယ်။ မနက်ကလည်း ဘာမှမစားခဲ့တာတစ်ကြောင်း နောက် ဇင်ချက်ထားတဲ့ ငါးကလေးအိုးကပ် ဆိုတဲ့ဟင်းကို ခုမှ ကောင်းကောင်းစားဖူးသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဇင်က ဧည့်ခန်းဘက်ကို တစ်ချက်အရိပ်အခြေကြည့်နေပြီး ....
“လာလေ..... ဘာလုပ်နေတာလဲ ..”
စိတ်ဆိုးတဲ့ မျက်နှာနဲ့ မာန်ပါတဲ့ အသံနဲ့ ခေါ်နေတယ်။ ဘာမှပြောမနေတော့ဘူး... စားနေတဲ့ ဇွန်းကို အသာချ ဇင့် ထမီကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလှန်လိုက်တယ်။ ဇင် ကျွန်တော့်ကို နောက်ပြန်လှန်ကြည့် စူးစမ်းတဲ့ အကြည့်နဲ့ကြည့်နေတယ်.... ဇင့် ဖင်ကိုတချက်ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး .... ရိုက်လိုက်တယ်။ နောက်ပြီး ဇင့်ဖင်ကို ပိုပြီး ကွေးညွန့်ပြီး ကုန်းနေစေရန် ဇင့် ခါးကို ဖိချလိုက်တယ် ဇင့်ခါးက နိုမ့်ကျသွားလို့ ထင်တယ် ဖင်က ထောင်တက်လာသလို့ ဇင့် ရွှေခရုလေးကလည်း အပေါ်ကိုပိုပြီးငေါတက်လို့ လာတော့ ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို တေ့ပြီး အချက်မှန်မှန်ဆောင့်ထည့်လိုက်ရာ အချက်၅၀ ကျော် ၆၀ လောက်တွင် ဇင် ကျွန်တော့်ဘက်ကို မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကြည့်နေပြီး .....
“ဟုတ်ပြီး ကိုကြီး ဟုတ်ပြီ ကိုကြီး မြန်မြန်လေး မြန်မြန်လေး .... အား...အီးးးး....”
သူမှာ ပြီးချင်နေပြီလားမသိ အသံကလည်း တိုးတိုးလေး အသံထွက်ရုံလောက်လေးရယ်ပါ။ ဒီလိုပြောလာတော့ ကျွန်တော်ခပ်မြန်မြန်လေး ဆောင့်ထည့်လုပ်ပေးလိုက်တော့ ဇင် တချက်သက်ပြင်းရှည်ရှည်ကြီးချရင် သူ့ဒူးတွေ အနည်းငယ်ယိုင်လှဲသွားချင်ပေမဲ့ ကျွန်တော်မပြီးသေးတာသူသိလို့ အားတင်း၍ ဖင်ကို ပြန်ကုန်းပေးတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်မှာလည်း စိတ်ထဲ မိန်းမတယောက် ဖင်ကုန်းပေးနေတာကို လုပ်ရတဲ့ စိတ်ထဲခံစားချက်နဲ့ အတူ ကာမဆက်ဆံမှုရဲ့ အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ချင်နေပြီလေ။
ဒုတ်တခုလုံး ယားကျိလာသလိုလို နဲ့ နောက်ဆုံး ဆောင့်ချက်တွေနဲ့ အတူ သုတ်တွေ ဇင့် ရွှေခရုလေးရဲ့ အတွင်းထဲ လောင်းထည့်လိုက်တော့ .... ဒုတ်တချောင်းလုံး သာမက ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးပါ တဒိန်းဒိန်း အချက်ပေါင်းများစွာ ခုန်နေတုန်း ဇင် ပျာပျာသလဲ ဒုတ်ကိုဆွဲချွတ်ရင်း...
“အာာာ.. ပြီးသွားပြီလား.. ပြီးသွားတာလား ...”
ကျွန်တော်ဘာမှမပြောနိုင်တော့ပါ .. လန့်ဖြန့်နေတဲ့ ဇင် တယောက် သူ့ရွှေခရုလေးကို လက်နဲ့ ပေါင်လေးကားပြီး စမ်းကြည့်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ သုတ်တချို့က ပြန်ထွက်လာတယ် ထင်တယ် ဇင့်လက်ထဲမှာ သုတ်အစအနတချို့ကို ဇင်ကြည့်နေပြီး စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တဲ့ပုံနဲ့ အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ပါးကိုကော ခေါင်းကိုကော ရင်ဘတ်တွေကောကို အချက် ပေါင်းများစွာရိုက်နေတယ်။ ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးရက်ပါ.. ဇင့် ရဲ့လက်တွေကို ဖမ်းချုပ် နောက်ပြန်ထိန်းလိုက်ပြီး ဇင့်ပါးလေးကို နမ်းလိုက်ပြီး..
“ဘာဖြစ်လဲ ဇင်ရယ်.. ကိုကြီး ဇင့်ကို လက်ထပ်မယ် ..ယူမယ် .. သားမှတ်မှတ် မယားမှတ်မှတ် ပေါင်းမယ်... ကလေးတွေ အများကြီးလိုချင်တယ် ဇင်ရယ်... ကိုကြီးကိုချစ်တယ်လို့ စကားလေးတစ်ခွန်းလောက် ပြောပါလား ဇင် ရယ်... ”
ဇင့်ဆီက ဘာစကားပြန်မှမရ ...ဇင်ရယ် ကိုကြီးကို ချစ်ရဲ့လားဟင်... ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ဇင့် ဆီက ဘယ်တော့မှ ပြောမှာလဲ ဟင်... ရင်ထဲမှာ ဇင့်ကိုချစ်ရတာ မ၀သလို စိုးရိမ် တဲ့စိတ်တွေလား စိုးထိတ်တဲ့ စိတ်တွေလား ဝေးခဲ့၍မရတော့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုတော့ ဇင် ...ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲမှာပဲ လေ.. ခုချိန်လေးကို ပိုတန်ဖိုးထားမိပါတော့တယ်....။
တက်ကြွလန်းဆန်းနေတဲ့ စိတ်တို့နဲ့အတူ ကားကို ဖြည်းညင်းစွာ မောင်နေရင်း အလုပ်ကို စောစောထွက်လာခဲ့တယ်။ ချစ်ခင်ကြင်နာယုယမဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိတာနဲ့ကျွန်တော့်ဘ၀ လန်းဆန်းတက်ကြွနေလိုက်တာ အင်အားတွေလား ခွန်အားလား ရဲရင့်မှုတွေလား ရှေ့ဆက်ရမဲ့ ဘ၀ခရီးအတွက် မကြောက်မရွံ့ရှေ့ကို တိုးလိုက်ချင်တော့တယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ဇင်နဲ့အတူ သာယာအေးချမ်းတဲ့ ဇင်နဲ့ ကျွန်တော်တို့မှ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ ချစ်စရာသားလေးတွေ ချစ်စရာသမီးလေးတွေနဲ့သာဆိုရင် ကျွန်တော်ဒီကမ္ဘာမှာ ဂရုစိုက်ရမဲ့သူက ဇင်နဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ သားတွေသမီးကိုပါပဲ။
ကားစီယာတိုင်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကိုင်ရင်း လူကိုပျော်လွန်းလို့ ထခုန်ချင်လာမိသလို ဇင့်ကို ကလေးလေးတွေ အများကြီး လေးငါးယောက် မွေးခိုင်းရမယ်ဟု စိတ်ထဲပြောနေမိလို့ တစ်ယောက်ထဲ အားရပါးရ ရယ်မောနေမိတယ်။ ကုမ္မဏီရုံးခန်းကို ရောက်တော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းတွေက အနားကပ်လာပြီး....
“မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲ ငါကြည့်နေတာ ရုံးထဲကို ၀င်လာထဲက ...”
“အေး ဟုတ်တယ် ... ဟေ့ကောင် မျိုးကျော် မင်းကိုယ်မင်း နှစ်ဆယ်ကျော် အစိတ်များမှတ်နေလာ အိနြေ္ဒလေးဘာလေး ထိန်းပါအုန်းကွ..”
“ဟာ... ငါက ဘာဖြစ်နေလို့လဲ ... ”
“မင်းကို ငါတို့ကြည့်နေတာ ခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ပုံစံတွေက အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်... ”
“ဟားဟားဟား... မဟုတ်မှလွဲရော ဒေါ်တင်မိုးနိုင်ကြီးနဲ့ တအားအဆင်ပြေနေပုံ ထောက်တယ်...”
“ဟာကွာ .. မင်းတို့ကောင်တွေ သူ့အကြောင်း ထည့်မပြောနဲ့ကွာ .. ခေါင်းထဲကို မထည့်တာ...”
“မင်းကလည်း သူ့အကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့ မျက်နှာကြီးကို ချက်ချင်းပျက်သွားတာပဲ .. ဘာလဲ ပြန်ရောက်တာနဲ့ တန်းရန်ဖြစ်တာပဲလား.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မနက်ဖြန်တော့ တင်မိုးနိုင် အလုပ်ပြန်ဆင်းမယ်တဲ့ ခွင့်ဆယ်ရက်ရတာ အကုန်မယူတော့ဘူးတဲ့ ငါးရက်ပဲ ယူတော့မယ်တဲ့ ..”
သူတို့တွေ ကျွန်တော့်ကို တင်မိုးနိုင်အကြောင်း ပြောလိုက်တော့ စိတ်ထဲ တင်မိုးနိုင်အကြောင်းရောက်လာတယ်။ ဘာလဲ ဒီမိန်းမ အသားလွတ် စိတ်ကြီးဝင် ဘ၀င်လေဟပ်နေတဲ့ မိန်းမ။ ဘယ်တော့မှ မဆက်ဆံတော့တာပဲ ကောင်းတယ်။ တင်မိုးနိုင်အကြောင်း တွေးလိုက်တော့ ရင်ထဲ ဒေါသထွက်လာသလိုလို ရှက်လာသလိုလိုနဲ့ မို့ သူ့အကြောင်း ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဇင့်ကိုပဲ အမြဲ ဦးနှောက်ထဲ ထည့်တော့မယ်။ ဇင့် အကြောင်းတွေးမိပြန်တော့ ခဏအတွင်း စိတ်ထဲပေါ့ပါးလာသလို ဇင့်ဆီကို ဒီညသွားအုန်းမယ်။ ဇင်က သူ့အမေသက်သာမှ သူလာခဲ့မယ် ခုတော့ မလာနဲ့လို့ ပြောပေမဲ့ ရအောင်သွားမယ်။ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ပျော်နေမိတယ်။
နေ့ခင်းရောက်တော့ တာမွေဘက်ကို ကုမ္မဏီ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတခုကို ကုမ္မဏီက ၀န်ထမ်းတချို့နဲ့ အပြင်ထွက်ကြည့်စရာရှိလို့ ကုမ္မဏီက ကားနဲ့ပဲ ထွက်လာခဲ့တယ်။ ပစ္စည်းတွေကြည့်ပြီးအပြန် မထင်မှတ်တဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ရင်ဘတ်တခုလုံး မိုးကြိုးပစ်ခံလိုက်ရသလိုပါပဲ။ မဟုတ်ပါစေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေလို့ ရင်ထဲမှာ ဆုတောင်းမိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆုတောင်းမပြည့်ပါ။ ဇင်ရယ် သူနဲ့ရွယ်တူကောင်လေး တစ်ယောက်ကို ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ လက်ချင်းချိတ်ရုံတင်မကပါဘူး။ ကောင်လေးရဲ့ပခုံးကိုပါ ခေါင်းလေးမှီပြီး မိုးမမြင်လေမမြင် လမ်းလျောက်နေကြတာ ... သူတို့နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် နီးလာတော့ ကားကိုရပ်ပြီး ကားထဲကနေသေချာကြည့်နေမိတယ်။ ကုမ္မဏီက ကားမို့လို့ မရိပ်မိဟန်ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်တော်ကားထဲမှ သေချာကြည့်နေတာကိုတောင် မမြင်နိုင်တော့လောက်အောက် ပျော်နေကြပါလား။
ရပ်ထားတဲ့ ကားကိုကျော်ပြီး သူတို့တရွေ့ရွေသွားတာကို ကားနောက်ကြည့်မှန်ကနေကြည့်နေမိတယ်။ နောက် ကားပေါ်ကဆင်းပြီး သူတို့နောက်ကို လိုက်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ပေမဲ့ ဇင့် စိတ်ကိုသိနေတာကြောင့် အသဲလည်းကွဲ လူကြမ်းကြီးလည်း မဖြစ်ချင်တာကြောင့် စိတ်ကိုလျော့ချလိုက်တယ်။ ရက်စက်လိုက်တာ ဇင်ရယ် အကိုရယ် မောင်ရယ်လားလို့တော့ မထင်ချင်ပါဘူး။ နဂိုထဲက ရှုပ်တဲ့မိန်းကလေး တစ်ယောက်မို့ အားလုံးကိုမေ့ပြီး ချစ်ခဲ့ပါလျက်။ ခုတော့ အိပ်မက်တွေ အားလုံးကို ဖျက်ဆီးလိုက်သလိုပါပဲ။
သူတို့ ဝေးပြီးပျောက်သွားသည်ထိ ကြည့်ပြီးမှ ကုမ္မဏီကို ပြန်လာခဲ့တယ်။ တစ်လမ်းလုံး စိတ်ဓာတ်တွေကျလာသလို ငါဘ၀က ဘာလဲ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ ကိုယ်တကယ်ချစ်မိပြီ ဆိုတော့လည်း အပြောင်းအလဲက မြန်လိုက်တာ။ အလုပ်ထဲရောက်တော့လည်း စိတ်မပါတော့ပေ။ စိတ်တွေက ဇင့်ဆီပဲ ရောက်နေတယ်။ ၀မ်းနည်းလာသလို စိတ်လည်းတိုလာတယ်။ သူက ဘာလဲ ဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးလဲ ဘာကိုလိုချင်တာလဲ နားကိုမလည်တော့ဘူး။ ငါ့ဘ၀က ကံပဲဆိုးတာလား အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် မိမိကိုယ်ကိုလည်း အတော်စိတ်ပျက်နေမိတယ်။
ညနေရောက်တော့ အိမ်မပြန်တော့ဘဲ တစ်ယောက်တည်း ဘီယာဆိုင်ကိုဝင်ပြီး ဘီယာသောက် သီချင်းဆို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ဖွင့်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုမှမရ စိတ်တွေက ဇင့်ဆီပဲ ရောက်ရောက်လို့နေတယ်။ အချိန်တွေ ဘယ်လောက်ကြာအောင် သောက်လိုက်တယ် မသိ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ၉ နာရီထိုးတော့မယ်။
ဇင့်ကို တွေ့ချင်တဲ့ စိတ်တွေက ထိန်းမရတော့ပါ။ ဇင့် က ငါ့ချစ်သူပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ခွင့်လွတ်သေးတယ် ဇင်ရယ် ... ခွင့်လွှတ်သေးတယ်။ လောကမှာ ငါ့အတွက်မိန်းမတွေ အများကြီးရှိတယ် ဆိုပေမဲ့ ငါချစ်တာ ဇင်ပဲ ..... ငါကြိုက်တာ ဇင်ပဲ.. ငါစွဲလမ်းတာ ဇင်ပဲ... ကားသော့ကို ကောက်ကိုင်လိုက်ပြီး ဘီယာဆိုင်မှာ ဇင့်အိမ်ကို အမြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ တိုက်ဆိုင်တာလား ကံကောင်းတာလားမသိ ဇင် တို့နေတဲ့ ရပ်ကွက်ကို မရောက်ခင်မှာပဲ ကားလမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
နေ့လည်က စိတ်တိုနေတဲ့ အရှိန်ကလည်းရှိသေးသမို့ စိတ်ထဲကနေ ဇင့်ကို ပလက်ဖောင်းပေါ်က မိန်းမ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာနေ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ကလေချေတွေနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ မိန်းမ တွေ့ကြတာပေါ့ကွာ .. ဟု တွေးနေရင်း ကားကို ဇင့် ဘေးနာမှာ ရပ်လိုက်တယ်။ ဇင့် ဘက်က ကားတံခါးကို လှမ်းဖွင့်ပြီး....
“အိမ်ပြန်မလို့လေ ပြောထားရဲ့သားနဲ့ .... အမေနေမကောင်းဘူး..”
“တက်လို့ ပြောနေတာ မကြားဘူးလားးးးးး ”
ကျွန်တော် ဘီယာ အရှိန်လေးနှင့် ဒေါသထွက်ပြီး အော်ထည့်လိုက်တယ်။ လမ်းဘေးက ဆိုက်ကားသမားတချို့ ကျွန်တော်တို့ အဖြစ်ကို ကြည့်နေရင်းမှ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ ညီမလေးဘာကူညီရမလဲ မင်းသမီးလေးအတွက် လူစွမ်းကောင်းလုပ်ပြီး အချောင်နာမည်ကောင်း ယူမယ်ဆိုတဲ့ အကြံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကို လာနေကြတယ်။
ဇင် လဲအခြေအနေကို ရိပ်မိဟန်ဖြင့် ဇင်သာဆက်ပေရပ်နေရင် ပြဿနာတွေက ဒီထက်ပိုကြီးလာနိုင်တာမို့ ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ ကားတံခါးမှတဆင့် ကားထဲဝင် တံခါးပိတ်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ကျွန်တော်ကားကို အရှိန်နဲ့ မောင်းထွက်တော့ စောစောက ဆိုက်ကားသမားတွေက ဇင့်ကို လှမ်းဆဲကြတယ်....
“ဖာ သည် မ ”
ကျွန်တော်လည်း စိတ်ထဲထောင်းကနဲ့ ကားထဲကနေပဲ ..
“ ... --ီး ပဲ ... ”
လို့ဆဲလိုက်တော့ ဆိုက်ကားသမားတွေ ဒေါသတွေထွက် စွေ့စွေ့ခုန်ပြီး ကျန်ခဲ့တာ နောက်ကြည့်မှန်ကနေ ကြည့်ပြီး ရယ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဇင် ကျွန်တော့်ကို အကြောင်သားငေးကြည့်နေတာ ကျွန်တော် သိလိုက်ပါတယ်...
အိမ်ရောက်တော့ ဘယ်တုန်းကမှန်း မမှတ်မိတော့တဲ့ အရက်လက်ကျန်ကိုယူပြီး စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ...ရေခဲထည့်ထားတဲ့ ဖန်ခွက်ထဲ အပြည့်သာထည့်ပြီး အမြန်တငုံသောက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အရက်ခွက်လေးကိုကိုင်ပြီး ဇင် ထိုင်နေတဲ့ ဧည့်ခန်းက ဆိုဖာနားကို လျောက်သွားလိုက်တယ်။ ဇင် ကျွန်တော့်ကို စူးစူးစိုက်စိုက် တည်တည်ကြီး ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သိပ်ပြီးဂရုမစိုက်ချင်တော့ပါ။ ဒါပေမဲ့ နေ့လည်က ကိစ္စကိုတော့ ရအောင်ရှင်းရမယ်။ အရက်ကို နောက်တခါထပ်ငုံပြီး ဖန်ခွက်ထဲမှ ရေခဲလှုပ်ရှားသံလေးတွေ ထွက်လာတဲ့ အထိလှုပ်ခါ၍ ဇင့်ကို မကြည့်ပဲ....
“မင်းကိုငါ မေးပါအုန်းမယ် ..... မင်းမှာ ရည်းစားဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ ငါ့ကို ထည့်မတွက်နဲ့ အုန်းနော် ... ဘဲ ဘယ်နှစ်ပွေ ရှိလဲ မင်းမှာ ...”
ဇင့်ကို မင်းနဲ့ ငါနဲ့ သုံးနှုံး လိုက်လို့ ထင်တယ်။ ဇင် ကျွန်တော့်ကို မျက်လုံးမီးတောက်မတတ် ကြည့်နေတယ်။ နောက် ... ဆက်ကနဲ့ ကောက်ထခါ ...
“ကျွန်မ ပြန်မယ် ...”
“ဟိုးထား ဟိုးထား မမလေး... ဒီလိုလုပ်လို့ ဘယ်ရမလဲ..”
ကျွန်တော်အရက်ခွက်နဲ့ ဇင့် ရင်ဘက်နားထောက်ပြီး လှမ်းတားလိုက်လို့ သူနောက်ကို တွန့်သွားတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အရက်ခွက်ထဲက အရက်တွေ သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်ဖိတ်ရင် သူတကိုယ့်လုံးနံစော် သွားရင် ပြန်ရခက်မယ်လေ။
“မင်း... ငါမေးတာ ကောင်းကောင်းဖြေရင် မင်းပြန်လို့ရပြီ ...မင်းထွက်သွားလို့ရပြီ .... မင်း ငါ့ဘ၀ထဲက ထွက်သွားလို့ရပြီ .... မင်း ..ငါ့နှလုံးသားထဲက ထွက်သွားလို့ရပြီ... ”
အသံမာမာနဲ့ ပြောလိုက်မိပြန်ပြီ။ ကျွန်တော်တကယ့် ရင်နဲ့ အမျှခံစား ရလွန်းလို့ပါ..... အရက်ကို ထပ်မော့သောက်လိုက်ပြီး ကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်တယ်။
“ငါ မေးချင်တာက မင်း ငါ့ဆီက ဘာလိုချင်လို့လဲ ... အယ်မှားလို့ ဘာလိုချင်လဲ.... ငါ့ဘ၀ကိုလား ငါ့အချစ်တွေလား... ငါပိုင်ဆိုင်တွေလား ငါ အကုန်ပေးနိုင်တယ်။ ခက်တာက မင်းဘာလိုချင်းမှန်း ငါမသိသလို မင်းကို ငါ နားကိုမလည်ဘူးကွာ ငါပဲ ညံ့တာပဲ လား ... ပြောစမ်းပါအုန်းကွာ .... မင်းက ဘာလဲ..”
“ကျွန်မ ဘာမှမလိုချင်ဘူး ... ဘာမှမလိုချင်တော့ဘူး ..”
“ဟုတ်ပြီကွာ ... မမေးတော့ဘူး နားမလည်မဲ့ အတူတူတော့ ပြဿနာကိုပဲ ရှင်းတော့မယ်.. မင်းကိုငါပြောတယ် ဇင့်ကို ကိုကြီး ယူမယ် .. ဇင့်ဟာဇင် ... အရင်ကဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ကိုကြီး အကုန်ခွင့်လွှတ်တယ် ... ဇင့်ကိုချစ်တဲ့ အချစ်တွေနဲ့တင် ကိုကြီးအားလုံးကို မေ့နိုင်တယ်... ထပ်မရှုပ်တော့နဲ့ပေါ့ကွာ...”
“ကျွန်မ ဘယ်မှာ ရှုပ်နေလို့လဲ ...”
စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောနေလေပြီ ....
“အော်... ဟဟဟဟ... ဘယ်မှာ ရှုပ်လဲ ဟုတ်လား... ပြောပြရတော့မှာပေါ့... ကွေ့ပတ်ပြီး မေးမနေတော့ပါဘူး.... မင်းနေ့လည်က တာမွေဘက်မှာ မင်းဘဲကိုလက်ကလေး ချိတ်တာတင် မဟုတ်ဘူး ... ပခုံးလေးကို ခေါင်းလေးမှီပြီး အပျော်ကျူးနေတာလေ... အဲဒါဘာလဲ.... ငါ့ကို ပြောပြပါအုန်း ... ကွာ .”
ဇင့် ဆီက အသံမကြားရတော့ပါ.. ဒါပေမဲ့ သူခိုးလူမိလို့ စိတ်တွေ မလုံမလဲ ဖြစ်နေတယ် မထင်နဲ့ ... တစ်ခုခုကို ရဲရဲ ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြောတော့မယ့် ပုံမျိုး ....
“ပြောပါအုန်း ကွာ ... ငါလေ... ငါလေ.. ငါ့မှာတော့ စိတ်ကူးတွေ ယဉ်လိုက်ရတာ မင်း ငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ ပြောလာမဲ့နေ့ အထိ... ကဲ ပြောပါအုန်း အဲဒါဘယ်သူလဲ ... မင်းရဲ့ ဘယ်နှစ်ယောက်မြောက် မင်း ခံနေတဲ့ကောင် လဲ...”
ကိုယ့်ကိုကိုယ် မယုံနိုင်အောင်ပါပဲ ကျွန်တော့်ဆီက ကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားတွေ ထွက်လာလို့ပါ။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ဒီလိုစကားမျိုး ဘယ်တုန်းကမှ မပြောခဲ့ပါ။ အခု ဇင့်ကို ပြောလိုက်တော့ ဇင် ကျွန်တော့်ကို စားမယ့် ၀ါးမဲ့ ပုံနဲ့ ကြည့်ရင်း ...
“ပြောမယ် ပြောမယ် ... သေချာနားထောင် ..”
မပြောပါနဲ့ ဇင်ရယ် ... မပြောပါနဲ့ ဇင်ရယ် ဇင် ပြောတဲ့ စကားလုံးတွေကို ကိုကြီးကြောက်လို့ပါ ဇင်ရယ်... ကိုကြီး သိတယ် ဇင်ဘာပြောမယ် ဆိုတာကို... ဇင်ရယ် ကိုကြီး တကယ်ဝမ်းနည်းလိုက်တာ .. ယောက်ျားကြီးဖြစ်ပြီး ငိုချင်လာပြီ ဇင်ရယ်... မပြောပါနဲ့ ဇင် ရယ် ကိုကြီး အရမ်းကို ချစ်လို့ ပါ... ဇင့်ကို စိတ်ထဲကနေပြီး အကြိမ်ကြိမ် ပြောနေပေမဲ့... ဇင် ကျွန်တော့်ကို မျက်ရည်တွေ ၀ဲ သေချာ စေ့စေ့ကြည့်ပြီး...
“သူက ဇင့် ဘ၀မှာ အချစ်ရဆုံး ချစ်သူ... ဇင် နှလုံးသားကို ပိုင်တဲ့သူပဲ....”
ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကို လွှနဲ့ တိုက်လိုက်သလိုပါပဲ တဆစ်ဆစ်နာလွန်းလှသလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ၀မ်းနည်းလာသလို ဇင့်ကို ဒေါသထွက်လာပြီး...
“ဘာ.... မင်းရဲ့နှလုံးသားကို ပိုင်တဲ့သူ ဟုတ်လား... မင်းအချစ်ရဆုံး ချစ်သူ ဟုတ်လား....”
“ဒါဆို ငါက ဘာလဲ .....မင်းအတွက် ဘာလဲ.. .. ငါက မင်းအတွက် ဘယ်သူလဲ.... ”
ကျွန်တော် ဒေါသလည်းထွက်ပြီး ဇင့်ရဲ ပခုံးလေးကို ကိုင်ပြောလိုက်တော့ သူ အားကုန် အတင်းရုန်းပြီး ပြန်တော့မယ် အလုပ် ကျွန်တော် ဇင့်ကို နောက်ကနေဖက်ပြီး ဇင့် နို့တွေကို ဆုပ်ကိုင် ...ဇင့် တင်ပါးတွေကို ကျွန်တော့်ကိုယ်နဲ့ ထပ်ပြီး ဇင့် ထမီကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့တယ်။
ထမီကျွတ်ကျသွားတာကို ဇင် လှမ်းဖမ်းဆွဲလိုက်ပေမဲ့ မမှီလိုက်ပါ ... ထမီက အပုံရက်သားလေး အောက်မှာ ... ဇင် အတင်းရုန်းနေရုံတင်မက သူ့လက်တွေနဲ့နောက်ပြန်ကော လက်ပြန်ကော နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ရိုက်နေတော့တယ်။ ကျွန်တော်ဒီလို အကြမ်းကိုင်လို့ ထင်တယ် ... ဇင် တော်တော်လေး ဒေါသထွက်နေပုံ ရတယ်။ သူ့ ပါးစပ်ကလည်း ဆဲရေတိုင်းထွာနေလိုက်တာ။
ကျွန်တော်လည်း ဒေါသလည်းထွက် မွှန်ကလည်း မွှန်နဲ့ ဆိုတော့ ဇင်ဒီလောက် ရိုက်နေတာတောင် နာရကောင်းမှန်းမသိတော့ဘူး။ ဇင် ရိုက်နေတဲ့ ကြားက ကျွန်တော့ ဘယ်လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ဇင့်ခါးကို သေချာတင်းကျပ်အောင် ဖက်ထားတယ်... သူ့အောက်ခံဘောင်းဘီကို ကျန် ညာလက်တစ်ဖက်နဲ့ ရအောင်ချွတ်နေတယ်။ တော်တော်လေး သန်တဲ့ ဇင်ပဲ နှစ်ယောက်လုံး မတ်တပ်ရပ် လုံးနေပေမဲ့ လဲမကျအောင် ထိန်းရသေးတာမို့ ဆိုဖာဘက်ကို တဇောင်းတင်ကာ၍ တွန်းထားလိုက်တယ်။
ကျွန်တော် သူ့ဘောင်းဘီသေးသေးလေးကို ချွတ်မှသူကပေါင်ကို ကားထားလိုက်သေးတယ်။ စိတ်ထဲလုပ်ချင်တဲ့ ဇောကလဲ ကပ်လာတာမို့ ယောကျာ်းတို့အား ဘယ်မိန်းမ ခံနိုင်အံ့နည်း ဆိုသလို ဇင့် ခါးကို ချုပ်ထားရင်း တန်းလန်း ဆွဲမလိုက်ပြီး ဇင့် ဘောင်းဘီလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။
မထင်မှတ်ပဲ ဇင့်ရဲ့ လက်ပြန်ခပ်ပြင်းပြင်း ရိုက်ချက်တွေထဲက တချက်က နားအုံတည့်တည့်ကို ထိလိုက်လို့ နားမှ ခဏတာ ဘာအသံမှ မကြားနိုင်တော့ ၀ှီ ကနဲ့ မြည်နေတော့တယ်။ စိတ်တိုနေတဲ့ ကြားက အနာခံလိုက်တော့ ဒေါသထွက်ပြီး ဇင့်နားသယ်ကို တချက်ရိုက်လိုက်တော့ .... ဇင် တချက်ငြိမ်ကျသွားတယ်။
ဇင် ငြိမ်ကျသွားတုန်း ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကို အမြန်ချွတ်နေတုန်း ဇင် ကျွန်တော့်ကို မျက်ရည်စတွေနဲ့ တချက်လည်ပြန် လှည့်ကြည့်နေတယ်။ ပြီးနောက် ....
ဇင်ကို ချုပ်ထားတဲ့ ကုန်းလျက်အနေအထားတိုင်း ထောင်နေပြီးသား ဒုတ် --စ် လေးနှင့် ဇင့် ရွှေခရုထဲ စတင်ထည့်မယ် အလုပ် ဇင် ထပ်ပြီး အားကုန်ရုန်းနေပြန်တယ်။ ဒီတခါတော့ ဘယ်လက်ကော ညာလက်ပါ သေချာ ခါးကနေ ပိုင်းချုပ်ထားပြီး ဒုတ်ကို ဇင် ရှေ့ဘက်နေ လျိုပြီး လှမ်းကိုင် အသားဆောင့်ထည့်လိုက်တယ်။
ဇင် စိတ်မပါတော့ ဇင့် ရွှေခရုလေးထဲမှာ အ၀င်ချောစေတဲ့ အရည်တွေ မရှိသေးတော့ --စ်တော့ ၀င်ပါရဲ့ ကြပ်ထုပ်နေတယ်။ ဇင်လဲ ခါးကို တချက်ကော့လှန်တက်ပြီး ထပ်ရုန်းနေတော့တယ်။ --စ် ၀င်ရုံလေး ခဏ ငြိမ်ထားပြီး နောက် တခါအဆုံးထိထိုးထည့်တော့ ဇင့် ဆီက အရည်လေးတွေ စို့လာဟန်တူ တယ်။
နည်းနည်းချောချောမောမော ဒုတ်တချောင်းလုံး အဆုံးထိဝင်သွားတော့မှ ဇင် ခါးလေး အောက်ကို လျော့ချပြီး ခပ်ပြင်းပြင်းငြီးငြူသံနဲ့ အတူ ခါးလေး ကော့ကျသွားတော့တယ်။ ကျွန်တော့်မှာလည်း ဒီဒုတ်တချောင်းလုံး ၀င်ဖို့ အတော်လုံးလိုက်ရတာကြောင့် လူလည်း တအားမောနေသလို ဇင့် ရိုက်ထားတဲ့ လက်ရိုက်ချက်တွေကလည်း နာနေသေးတာမို့ ဒုတ်ကို တန်းလန်းကြီးထားပြီး ခဏ အမောဖြေနေလိုက်တယ်။
ဇင်လည်း ဒီလိုပဲထင်ပါတယ် .... တအားရုန်းပေးမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ သူ့ထဲ ဒုတ်တချောင်းလုံး ၀င်သွားတာမို့ မထူးတော့ပြီမို့ ငြိမ်ပြီး နားနေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ.. ဒီလိုလေးလည်း တကယ်အရသာတမျိုးပါလားနော်လို့ ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွေးနေပြီး ဒုတ်ကို ခဏလှုပ်ရှားကြည့် ဇင် ရွှေခရုလေးထဲမှာ အရည်တွေ တော်တော်လေး ထွက်လာတယ်ထင်ပါ့ .... အတော်လေးကို အနေသားကျပြီး လှုပ်ရှားလို့ကောင်းမဲ့ အနေအထားမို့ ဇင့်ကို ညင်ညင်သာသာလေး ပြန်ကိုင်တွယ်ပြီး တချက်ချင်းဆောင့်ထည့်ပေးနေ မိတယ်။ ဇင် ကလည်း စောစောတုန်းကလို မရုန်းတော့ဘဲ အလိုက်သင့် ပြန်ပြီး လှုပ်ရှားပေးနေသလို သူ့ဖင်ကို လည်း အစွမ်းကုန် ခါးလေးကိုအောက်ချပြီး ထောင်ပေးလာတော့တယ်။ လုပ်နေတုန်း ဇင် သူရဲ့အပေါ်အကျီနဲ့ ဘောလီကိုပါ ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်နောက်ကနေ ဆောင့်နေတာကိုတောင် သူ အားရဟန် မတူ ဇင်က နောက်ပြန်တောင် ဆောင့်နေပါတော့တယ် ....။
အရက်ရဲ့ အရှိန်ကြောင့်ထင်တယ် ပြီးဖို့နေနေသာသာ အရှိန်က တအားကောင်းနေတော့ ဇင့် ဖင်ကိုဆောင့်လို့ တအားကိုကောင်းနေဆဲပါ။ တချက်တချက် အားကုန်ဆောင့်လိုက်အသံက အိမ်ခန်းလုံလို့ တော်သေးတယ်။ ဇင့် တင်ပါးတွေကို သေချာ ဆုပ်ကိုင်ပြီး အချက်တိုင်းဆောင့်ထည့်နေရတာ မောရပန်းရမှန်းတောင် မသိပါ။ ဒီလိုဆောင့်ထည့်နေတုန်း ဇင့် လက်ကလေးက နောက်ပြန် ကျွန်တော့်လက်တဖက်ကို လှမ်းကိုင်ဆွဲယူပြီး သူ့ဆံပင်တွေကို ကိုင်ခိုင်းလာတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘာမသိညာမသိနှင့် သူ့ဆံပင်လေးတွေကို ဖွဖွလေးကိုင်ပြီး ဖွပေးရင်း ဆောင့်နေတုန်း...
“အဲလို လုပ်ခိုင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး......ဟာ...... ဆံပင်ကို ဆောင့်ဆွဲပြီး အားကုန်... --ိုးစမ်းပါ ..”
စိတ်မရှည်တဲ့ သူ့အသံလေးပါ။ ကျွန်တော်ခုမှ သဘောပေါက်တယ်။ ဟိုဗီဒီယိုကားတွေထဲကလို ဇင်လိုချင်တဲ့ ပုံစံကို သဘောပေါက်လိုက်တာကြောင့် အရက်အရှိန်လေးကလည်းတက် အံကိုတင်းတင်းကြိတ်လျက် ... သူတောင် ဒီလိုခံချင်နေသေးတာပဲ ဘာမှငဲ့နေစရာမလိုတော့ပဲ.. ဇင့် ဆံပင်ကို ဆောင့်ဆွဲ လိမ်ငင်ယူပြီး တချက်ချင်းစီ အားကုန်ဆောင့်လိုက်ရာ ..ဇင် ရှေ့သို့ ပစ်မကျခင်မှာ ဆံပင်ကို ဆောင့်ဆွဲထားလိုက်တယ်။ ဇင့် မှာ ခေါင်းက ဆံပင်ကို အဆွဲခံထားတာကြောင့် ခေါင်းမှာနောက်ပြန်လှန်ရင်း တချက် အော်သံ ခပ်ကျယ်ကျယ် တချက်ထွက်သွားတယ်။
“ အားး.. ” .....
တကယ် ပြောမပြတက်လောက်အောင် ခံစားရတဲ့ ခံစားမှုပါ။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို တိရစ္ဆာန်သာသာလုပ်နေရသလို ဖြစ်နေတာကြောင့် စိတ်ထဲ အားတုံ့အားနာဖြစ်မိသော်လည်း ဇင့် ရဲ့ လိုအင်တပ်မက်မှုကြောင့် စိတ်ရှိလက်ရှိ အားကုန်တချက်ဆောင့် အသာ ပြန်ငြိမ်ပြီး.... ကျွန်တော့်ဒုတ်ကြီးနဲ့ ရှိသမျှအားကုန် ဇင့် ခရွှေခရုလေးထဲသို့ အချက်ပေါင်းများစွာ ဆောင့်ထည့်လိုက်ရာ ဇင့်ရဲ့ ငြီးငြူသံ ကျွန်တော့်ရဲ့ အားထည့်သံတို့ ဧည့်ခန်းတခန်းလုံး ဆူညံ့သွားတော့တယ်။ ဇင့်မှာလည်း အတော့်ကို ယိုင်လှဲပြိုတော့မလို ဖြစ်နေတယ်
“အားးး. အားး.... အားး... ကိုကြီး ကောင်းတယ် လုပ်စမ်း.. လုပ်စမ်း.... အားနဲ့ --ိုးစမ်း.. --ိုးစမ်း.. အားးအားး ရွှီးးးး .... ၀ူးးးး .... အားး ....”
အသံမျိုးစုံထွက်နေအောင်.. ငြီးငြူပြီး ဇင် တချက်ခွေကျသွားတော့တယ်။ ဇင် ရှိုက်ကြီးရှိုက်ငယ်နဲ့ အမောဖြေပြီး.. ဒူးထောက်လျက် မပြီးသေးသော ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက် နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီး ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို နောက်ပြန်လှမ်းကိုင်ကာ သူ့ခရွှေခရုထဲ ထည့်ပြီး ဆက်လုပ်ခိုင်းနေတာကြောင့်.. သေချာစိတ်ကို နှစ်ပြီး အားကုန် အချက် ၄၀လောက် ဆောင့်အထည့်လိုက်သည်မှာတော့ ...
“အားးး.. အား.. ကိုကြီး.. ပြီးတော့မယ် ဇင် ....ကိုကြီး.. ပြီးတော့မယ် ဇင်... အားးး... အား....”
လူတကိုယ်လုံးကျင်တက်သွားသလို ဒုတ်ကနေ သုတ်တွေ ဇင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးထဲကို စီးဆင်းသွားပါတော့တယ်။ မောဟိုက်ခြင်းတို့နဲ့ အတူ ဇင့်ကိုယ်လေးပေါ်မှာ လှဲချလိုက်တော့တယ်။ ဇင်နဲ့ အတူ အောက်ခင်းကော်ဇော်ပေါ်မှာလဲ နှစ်ယောက်သားလှဲလျောင်းရင်း အချိန်ကြာကြာ အနားယူလိုက်ရတော့တယ်။ ဇင် ကတော့ သူ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးကို ကွေးထားပြီး တဇောင်းလှဲနေရာမှ ငိုသံ သဲ့သဲ့လေးကို ကြားနေရတယ်။ ကျွန်တော်ဆက်ကနဲ့ ထကြည့်တော့ ဇင် တကယ်ငိုနေတာပဲ.. မျက်နာမှာ မျက်ရည်တွေအပြည့် ကျွန်တော့်ကို ကျောပေးပြီး ခွေခွေလေး လှဲနေတယ်။ ဇင့် ပုခုံးလေးကို တချက် ညင်သာစွာနမ်းလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ဇင့်ကို တကယ်သနားသွားတယ်။
ဇင့် ကို သူ့မျက်နှာလေးကိုင်ပြီး ဆွဲအလှည့်...
“အားး... နာတယ်.... ”
“ဇင် ဇင်....ဘာဖြစ်လို့လဲ ...ဟင်...”
“သူ ပဲ ရိုက်ထားတာကိုး..... ဇက်က နာနေတယ်..”
ဇင့်နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းလိုက်ရင်း .....
“ကိုကြီးကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ဇင်ရယ်.. ကိုကြီး တကယ်ချစ်လို့ပါ..”
ဇင့်ကိုယ်လေးကို ဆွဲလှန် လိုက်ပေမဲ့ မျက်နှာကတော့ ကျွန်တော့ဘက်မလှည့်ပဲ တဇောင်း တဘက်ကိုလှည့်ထားတယ်။ ဇင့် နို့လေးကို တချက်ဆုပ်လိုက်တယ်။ နောက် ဇင် ခရွှေခရုလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ သုတ်တွေ အပြင်ကို နည်းနည်းတောင် လျှံကျလို့နေတယ်။ ကျွန်တော်အ၀တ်တစ်ခုကို ရေဆွတ် ရေညှစ်ပြီး ဇင့် ရွှေခရုလေးကို ညင်သာယုယစွာ သုတ်ပေးနေမိတယ်။ နောက် ဇင်ရဲ့ အ၀တ်မဲ့နေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာလေးကို ပွေ့ချီလိုက်တယ်။ ဇင် အလိုက်သင့်ပဲ... ကျွန်တော့ပခုံလေးကို ဇင့်လက်ကလေးက လှမ်းဖက်ထားတယ် မျက်နှာပေါ်က သူ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေကတော့ စိတ်ဆိုးဝမ်းနည်းနေတဲ့ ပုံလေးနဲ့ စူပုပ်လို့နေတယ်။ အဲဒီစူပုပ်နေတဲ့ သူ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ကျွန်တော်တစ်ချက် နမ်းလိုက်ပြီး အိမ်ပေါ်ထပ် ကျွန်တော့်အခန်းဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။
ဇင့်ကို ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်ပြီး စောင်လေးခြုံထားပေးလိုက်တယ်။ နောက် ကျွန်တော်ရေချိုးခန်းထဲဝင် ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး ကိုယ်တဇောင်းအနေထားနဲ့ လှဲနေတဲ့ ဇင့်အနားသွားကာ ဇင်ခြုံထားတဲ့ စောင်ထဲ တိုးဝင်လိုက်တယ်။ အ၀တ်မဲ့နေတဲ့ ဇင့် ကိုယ်လေးကို ကျွန်တော်ရဲ့ အ၀တ်မဲ့နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ နေရာအနှံထိစပ်လို့ ထားတယ်။ ဇင့်ခေါင်းလေးကို ကျွန်တော့်ရဲ့ လည်ပင်းနားမှာ ခိုးဝင်ခိုင်းထားပြီး ဇင့်ရဲ့ကျောလေးကို ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်ဘတ်နဲ့ အပြည့်နေရာယူတွယ်ကပ်ထားသလို ဇင်တင်ပါးတွေ ပေါင်လုံးလေးတွေ ခြေသလုံးလေးတွေက အစ ပူးကပ်လို့ထားလိုက်တယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကြောင့် ထင်တယ် သူ ကျွန်တော့်ကိုယ်လေးနားကို နောက်ပြန်တိုးလို့သာ ကပ်လို့နေတော့တယ်။ ကျွန်တော့် လက်ကလေးက ဇင့်ခါးလေးကို ဖက်ထားတုန်း ဇင့်လက်ကလေးက ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်ဖ၀ါးလေးကို လှမ်းကိုင်းပြီး သူရဲ့နို့အုံဆီကို ပြောင်းကိုင်ခိုင်းနေ သဘောမို့ ကျွန်တော် သူ့နုိ့အုံလေးကို လက်ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ ညင်သာယုယစွာ ကိုင်ထားလိုက်တော့တယ်။
ဇင် တော်တော်လေးကို ငြိမ်သွားပါလား...မျက်လုံးလေးပိတ်ပြီး အိပ်နေတဲ့ ပုံဆိုပေမဲ့ သူမအိပ်သေးပဲ တဇောင်းအိပ်နေရာမှာ ပက်လက်လှန်လှည့်လာတယ်။ ကျွန်တော် အလိုက်သင့်ပါပဲ သူ့ရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကို ထပ်ဆွဲကပ်ပြီးသေချာ ဖက်ထားလိုက်တယ်။ ဇင့် နှုတ်ခမ်းလေးကို တချက်ဖျက်ကနဲ့ နမ်းလိုက်တယ်။ ဇင် မျက်လုံးလေး ခပ်မှေးမှေးလေးဖြင့် ကျွန်တော့်ကို ဖွင့်ကြည့်နေတယ်။ ဇင့် နို့တွေကို ကိုင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ကလေးတွေက သူ့ကိုနမ်းနေရင်းမှ ဇင့်ရဲ့ ရွှေခရုလေးရှိရာ နေရာညင်သာစွာလျော့ချပြီး အမြောင်းလေးအတိုင်း စမ်းလိုက်တယ်။ ဒီလိုစမ်းလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ဒုတ်လေးကထလာပြီး ဇင့်ပေါင်ကို သွားထောက်နေတော့တယ်။
နောက်တခါထပ်ပြီး လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေပေါ်လာတာကြောင့် ဇင့်စိတ်တွေ နိုးကြွလာအောင် ကျွန်တော်ဇင့် ရွှေခရုလေးကို ခပ်မြန်မြန်လေး ပွတ်ပေးနေတော့ ဇင် ပတ်လက်လှန်အနေအထားမှ ကျွန်တော့်ဘက်ကို မျက်နှာခြင်းဆိုင် လှည့်လာပြီး ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းကို လာနမ်းပါတော့တယ်။ ဇင်ကတော့ ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို သူ့လက်ကလေးနဲ့ ကိုင်ပြီး ညင်ညင်သာသာလေးပဲ ထုပေးလို့နေတော့တယ်။ ဇင် ထုပေးနေတုန်း ဇင့်ရွှေခရုလေးကို ကြောကိုကျော်ပြီး ဖင်အနောက်ဖက်ကနေ နှိုက်မယ် အကြံနဲ့ လက်လှမ်းလိုက်တော့ ဇင့် ရွှေခရုလေးဆီ မရောက်ခင် ဇင့်ရဲ့ ခရေပွင့်လေးကို လက်ချောင်းနဲ့ အသာပွတ်ပေးပြီး ထိုးထည့်ဖို့ အပေါက်နားတေ့လိုက်တော့ ဇင်က ကျွန်တော့်ရင်ဘက်က ထုလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ရယ်ပြီးသူ့ကို ပြုံးပြတော့ သူကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းတွေကို လှမ်းနမ်းတယ်။
“ကိုကြီးက ပြုံးနေရင် တကယ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်သိလား... ဒါပေမဲ့ စိတ်တိုလာရင် ဇင် အရမ်းကြောက်တယ် ကိုကြီးရယ်...”
“ဟင်... ပြန်ပြောပါအုန်း ဇင်ရယ်... ”
“ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ဇင့်ပါးစပ်က ပြောလိုက်တယ်နော်... ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ ကိုကြီးကို ချစ်တာလားဟင် ”
ဇင် ပြန်မဖြေပါ။ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းလေးကို တချက်နမ်းပြီးနောက် ရင်ဘက်လေးတွေကို နမ်း။ ခြုံထားတဲ့ စောင်အောက်ကို လျိုဝင်သွားကာ ကျွန်တော့် ဒုတ်ကို သေချာပယ်ပယ်နယ်နယ် စုပ်နမ်းနေပါတော့တယ်။ ဇင့် ရဲ့အာခေါင်ထဲ တချက်နစ်ဝင်တိုင်း နွေးကနဲ့ နွေးကနဲ့ ဖြစ်သွားသလို ဖြစ်နေတုန်း ကျွန်တော့် ဒုတ်ကို စုပ်ငုံလျက် တချက်ရပ်နေရာပြီး ကျွန်တော့်တင်ပါးကို သူ့လက်ကလေးနဲ့ ဆွဲယူလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်လုပ်နေတယ်။ ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီး ဇင့် ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ သေချာကိုင်ပြီး ဇင့် ပါးစပ်ကို ဇင့် ရွှေခရုလေးလို သဘောထားပြီး ကျွန်တော်ဒုတ်ကို ခပ်မှန်မှန်လေး ထိုးထည့်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက် အကြိမ်ကြိမ် လုပ်လိုက်တော့တယ်။
ဇင် ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပေပးရာက ခဏရပ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ပတ်လက်လှန်ရန် ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ကို တွန်းထိုးလိုက်ကာ အပေါ်မှနေ၍ ကျွန်တော့်ဒုတ်အား သူ့ ရွှေခရုလေး အပေါက်ဝတွင်တော့ခါ ဖြည်းညင်းညင်သာစွာ ထိုင်ချလိုက်တော့တယ်။
ဇင် သူ့ရဲ့ခါးကို ဖြောင့်ဖြောင့်ထားကာ စီးချက်မှန်မှန်လေး ညင်သာစွာ လူးလွန့်လှုပ်ရှားနေရာမှာ သူ့တင်ပါးတွေကို ကိုင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေကို လှမ်းဆွဲယူပြီးသူ့နို့အုံပေါ် ဆုပ်နယ်ကိုင်ပွတ်သပ်ရန် ညွန်တာကြောင့် ဇင့်ရဲ့ နို့လေးတွေကို ညင်သာစွာ ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ် ပေးနေတော့သည်။ ဇင်က ဒါနဲ့တင် အားမရ မြင့်တက်လာတဲ့ သူ့ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေနဲ့ အတူ မျက်နှာကြီး ရှုံ့မဲ့ခါ သူ့လက်တဖက်က ကျွန်တော့်လည်ပင်းကို ဆွဲယူထူမလျက် သူ့နို့လေးတွေကို စို့နမ်းစေတော့တယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘယ်လက်မှာ ဇင့်ရဲ့ဖင်ကို လှမ်းကိုင်ဆုပ်နယ်၍လည်းကောင်း၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ ညာလက်က ဇင့်ရဲ့ဘယ်နို့အုံကို ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်ပေး၍လည်းကောင်း၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက ဇင့်ရဲ့ ညာနို့အုံလေးမှ နို့သီးခေါင်းလေးကို ညင်သာယုယကျင်နာစွာ ဆုပ်နယ်ပေးရုံတင်မက ဇင့်ရဲ့အချက်မှန်မှန်နဲ့ မြန်မြန် ဆောင့်ချက်တိုင်းကို သတိကပ်ခါ ကျွန်တော်အောက်ကနေ စည်းချက်မှန်မှန် ပြန်လည်ပင့်ဆောင့်ခြင်းတို့ကြောင့် ဇင့်မှာ တမူထူးကဲတဲ့ အရသာကို ခံစားနေရတာကို သူရဲ့ မျက်နာအမှုအရာ ပြသနေသလို သူ့ရဲ့ အပေါ်က လွန့်လူလှုပ်ရှား ဝှေ့ယမ်းကော့လှန်နေတဲ့ သူ့ရဲ့အပြုအမှုတွေက ၀ါရင့် ပြည်တန်ဆာမကြီး အသွင်လိုပါလား။ ဇင့်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ မြန်ဆန်လာတာကြောင့် ဇင့်တကိုယ်လုံးချွေတွေ ရွှဲနစ်လာသလို ဇင့် ရွှေခရုလေးမှ ထွက်လာတဲ့ အရည်တွေနဲ့ အတူ ကျွန်တော့်ဒုတ်မှ တဆင့် လျှံကျလာတဲ့ အဖြူရောင် ပျစ်တစ်တစ် အရည်တွေကလည်း ကျွန်တော့်ဆီးခုံတခုလုံးကို စီးကပ်လို့ နေလေပြီ။
ဇင့်မှာ မမောနိုင်မပန်းနိုင် လှုပ်ရှားနေရာမှ ကျွန်တော်သူ့ကို တချက်နားစေချင်တဲ့ သဘောနဲ့ သူ့တင်ပါးလေးကို လှမ်းကိုင်ထိန်းလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ဇင့် ထဲမှာအဆုံးထိ မြုပ်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးမှ အောက်ဘက်မှ ကျွန်တော့်တင်ပါးကို အထက်အနည်းငယ် ပင့်မြောက်လျက် ဇင့်မျက်နှာကို အံကိုခပ်တင်းတင်းကြိတ်ပြကာ ဇင့်ကို အောက်ကနေ ဆောင့်လုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဇင့်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ခြေကားလျက် ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ကိုင်လို့သာအော်နေတော့တယ်။
ဒီလိုအောက်မှ ဆောင့်ချက်က လွတ်လပ်တဲ့ ဆောင့်ချက်ကြောင့်ထင်တယ်။ တစက္ကန့်အတွင်း အချက်ပေါင်း ရာချီသွားသလားထင်ရအောင် ခွန်အားပါမြန်ဆန်မှုကြောင့်ထင်ပါရဲ့ ဇင့်ဖင်နဲ့ ကျွန်တော်တင်ပါးတို့ရဲ့ တချက်ခြင်း ရိုက်ဆောင့်လိုက်တဲ့ အသံက ဇင့်ဖင်နှစ်ခြမ်း ဗျမ်းဗျမ်း ကွဲသွားမလား ထင်ရအောင်ပါပဲ။ ဇင့်မှာလည်း အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ ထင်ပါရဲ့ ပက်လက်လှန်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ အလွတ် အင်းအားပါပါ လေးဘက်တွား ပေါင်ကားယားခွထားပုံမှာ တောင့်တင်းမာန်ပါလှ မျက်ဖြူလှန်မတတ် လိင်စည်းစိမ်ကို အချိန်နဲ့ စက္ကန့်မလွတ်စေရအောင် ခံစားနေသလို သူရဲ့ ပါးစပ်မှာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် အစွမ်းကုန် ဖြဲကားထားကာ အသက်ရှုရ အော်ငြီးရနှင့် အသက်လုနေရတဲ့ သူတယောက်နဲ့ သာတူနေပါတော့တယ်။ ဇင့်အခြေအနေကို သဘောပေါက်လာတယ် သူပြီးခါနီးပြီး ထင်သောကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ်မောနေတာတောင် ဂရုမစိုက်တော့ပဲ အမြန်ဆုံးဆောင့်ချက် အားပါတဲ့ ပင့်ချက်တွေနဲ့ နောက်ဆုံးဆောင့်လိုက်ရာ ... ဇင့်မှာ ငြီးငြူသံကို ပီပီသသ မငြီးငြူနိုင်တော့ပဲ မျက်ဖြူကြီးလန်ကာ ကျွန်တော့်ရင်ဘက်ပေါ်တွင် ဘုံးဘုံးလဲကျသွားတော့တယ်။ သူ့တကိုယ်လုံးကချွေးတွေ ရေအလားအောင်းမေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်စီးကျနေသလို သူတအားမောဟိုက်နေပြီး ကျွန်တော့်အောက်ကနေ စောစောတုန်းကလို့ ခပ်မြန်မြန်ကြီး ဆောင့်ချက်တွေမဟုတ်တော့ပဲ တချက်ခြင်း ဖြည်းညှင်းညင်သာစွာ ဆောင့်ပေးနေမိတော့..
“ကိုကြီး...အဲလို မလုပ်နဲ့... ခဏလေး ငြိမ်ငြိမ် နေပေးပါ..”
အသံမှာ မောဟိုက်နေတာတကြောင်း မပြောချင်ပြောချင်နဲ့ပြောနေတာတကြောင်း စကားမှာ ပီသခြင်းမရှိသလို အသက်လုပြောနေရတဲ့ သူတယောက်နဲ့ တူနေတော့တယ်။ ဇင့်ရဲ့ ရင်ခုန်နုန်းတွေ ပိုမြန်နေတာ ရင်ခြင်းကပ်ထားလို့ ကျွန်တော်ပဲခုန်နေလားထင်ရအောင် မြန်ဆန်လို့နေတယ်။ ၅ မိနစ်လောက် အနားယူပြီးနောက် သူ ... ခေါင်းလေးထောင်လာပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာကို သေချာစေ့စေ့စပ်စပ်ကြည့်နေတယ် သူမျက်နှာကို သေချာကြည့်လိုက်တော့မှ သူမျက်လုံးတွေမို့နေသလို မျက်နာတစ်ခုလုံး ပန်းရောင်သန်းနေတော့တယ်။ အတော်လေးမောဟိုက် သွားပုံရတယ်။
ကျွန်တော့်အောက်ကနေ ဒုတ်ကို လှုပ်ရှားပြီး တချက်ပင့်လိုက်တော့ “ အ ” တဲ့ မျက်နာလေး မဲ့ရှုံ့ပြနေလို့ ဆက်မလုပ်တော့ပဲ ခဏငြိမ်ပေးလိုက်တော့ သူ ကျွန်တော့်ဒုတ်ပေါ် ထိုင်ထားရာမှ ဖြည်းညင်းညင်သာစွာ ဆွဲနုတ်လိုက်တယ်။ နောက် အချောင်းလိုက်မာထန်ပြီး တောင်နေသော ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို လှမ်းကိုင်ကြည့်ပြီး ...
“ဇင်တော့ မရတော့ဘူးကိုကြီးရယ်... ”
ဆိုပြီး အပေါ်ကနေ လုပ်တော့ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလေးကို တချက်နမ်းပြီး ကျွန်တော့်ဘေးမှာ လှဲလာတော့တယ်။ နောက် သူ ကျွန်တော့်ကို ဘေးတိုက် လဲလျောင်းရင်းမှ ကျွန်တော့်က အပေါ်မှ လုပ်ရန်သဘောဖြင့် ဆွဲထူမလာတော့သည်။
ဇင် ပက်လက်လှန် အနေအထားနဲ့ သူ့ပေါင်လေးကို အစွမ်းကုန် ကားထားလို့နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ချက်ချင်းမလုပ်သေးပဲ ကားထားတဲ့ပေါင်ကြားထဲ ၀င်ဒူးထောက်၍ ခါးကို မတ်မတ်ထားခါ ကျွန်တော့်ရဲ့ ထောင်မတ်တင်းမာနေတဲ့ ဒုတ်ကြီးကို ဇင်ရှေ့မှာ တင် ဂွင်းထုပြပြီး ဇင် ရော ကျွန်တော့် စိတ်တွေ တဖန် တက်ကြွလာအောင် နိုးဆွတဲ့ သဘောပါ။ ကျွန်တော်လုပ်နေတာကို ဇင် အရောင်တောက်နေတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ မိတ်မသုံ ကြည့်နေတယ်။ ဇင့် ရွှေခရုထဲက အရည်တွေက ကျွန်တော့ ဒုတ်မှာပေကျံ ချွဲငြိနေသေးတာကြောင့် ဂွင်းထုတာ ချောမွတ်ပြီး ပိုတောင် အရသာရှိ သလိုပါပဲ။ မိန်းမတယောက်ရှေ့မှာ ကိုဒုတ်ကို ပြပြီး ဂွင်းထုနေတာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ အတော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ ကောင်များ ဖြစ်နေပြီလား။ အသိစိတ်မှာတော့ ရှက်တာတွေ မလုပ်သင့်တာတွေ ဖြစ်နေပေမဲ့ အခြေအနေအချိန်အခါ တဖက်သားက လက်ခံမှုအတိုင်း အတာအရရော ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားအရကြောင့်ထင်ပါတယ်။ ဇင့် ရဲ့ မျက်လုံးတွေက အရောင်တောက်ရုံတင်မက ကျွန်တော့် အပေါ်မှာဂွင်းထုလိုက်တိုင်း စည်းချက်နဲ့ အညီ သူအောက်ကနေ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ကြွအောင် အလိုက်သင့် လွန့်လူးလုပ်ရှား ပြနေတယ်။
ကျွန်တော့် ဒါနဲ့ တင်အားမရလို့ ဇင်ဗိုက်ပေါ်ကို တက်ခွကာ ဇင့် နို့အုံနား ဇင့်မျက်နာရှေ့တည့်တည့်တွင် ဒုတ်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်နယ်လှုပ်ရှားပြလိုက်ရာ ဇင် ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို လှမ်းယူဖမ်းကိုင်ပြီး မြန်ဆန်ကြမ်းတမ်းစွာ စုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ ဇင် ဒီလို စုပ်ပုံနဲ့ ဆို ပြီးသွားနိုင်တာကြောင့် ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ဇင့် ပါးစပ်မှ အမြန်ဖြုတ်ခါ ဇင့်ပေါင်ကြားထဲ ပြန်ဝင်ကာ ဇင့် ရွှေခရုလေးထဲကို ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို ဆောင့်ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ဇင် အောက်မှာနေ၍ ကျွန်တော့်ကို တင်းကြပ်စွာလှမ်းထားလို့ ဇင့် လက်တွေကို ပြန်ဖြုတ်ချပြီး ဇင့် ခြေထောက် နှစ်ဖက်ကို ဆွဲမ၍ ကျွန်တော့်ပခုံးပေါ်တွင် ထမ်းကာ အကောင်းဆုံးနဲ့ လှုပ်ရှားမှုအမြန်ဆုံး အနေအထားကို သေချာချိန်ရွယ်ပြီး အမြန်ဆုံး အားအပါဆုံးဖြင့် ဇင့်ကိုဆောင့်လုပ်ပါတော့တယ်။
ဇင့်ဆီးခုံနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီးခုံခြင်း ထိရိုက်မိသံက တခန်းလုံးကို ဟိန်းထွက်နေတောတယ်။ အချက်ပေါင်း ဘယ်လောက်များသွားတယ် ဆိုတာမသိပါ။ ကျွန်တော် အတော်လေးမောဟိုက် သွားတာကြောင့် ဇင့်အပေါ်မှာ အသက်လေး ခပ်ပြင်းပြင်း ရှုရင်း ခဏနားနေလိုက်တယ်။ အမောပြေသွားတော့ ပြန်လုပ်မယ်သဘောနဲ့ ပြန်လှုပ်ရှားတော့.. ဇင်က ကျွန်တော့် မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ....
“ပုံ စံပြောင်းအုန်း ” တဲ့ ဆိုလို့ ဒုတ်ကို ဆွဲထုတ်ကာ ဇင့်ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး နောက်က လုပ်မယ့်ဟန်ပြင်နေတော့.... ဇင် ဖင်မကုန်းပေးပါဘူး... ပက်လက်လှန် အနေအထားမှ တဇောင်းလှဲလိုက်ရင်း သူ့ခြေထောက်ကို အထက်ကို ကွေးလိုက်တော့ ဇင့်ရဲ့ ရွှေခရုလေးက ပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော် သဘောပေါက်လိုက်ပြီ။ လုပ်စေချင်တဲ့ သဘောက ဒီလိုလုပ်စေချင်တာပဲလို့ ... တွေးနေတုန်း ဇင့်လက်က ကျွန်တော့် ဒုတ်ကို လှမ်းကိုင်လာလို့ ကျွန်တော် ဖြောင့်ထားတဲ့ ခြေထောက်အပေါ်ခွထိုင်ပြီး ဇင့်ရွှေခရုလေးနဲ့ နီးနိုင်သမျှ ရွေ့ပြီးကျွန်တော့် ဇင့်ရဲ့ ခါးလေးကိုကိုင်ခါ ဒုတ်ကို ထိုးထည့်လိုက်တယ်။
ဇင်က သူ့ခါးကို ကိုင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေကို ဆွဲယူပြီး တဇောင်းလှဲနေတဲ့ အပေါ်က ပခုံးကို လက်နှစ်လုံးနဲ့ ကိုင်စေတယ်။ သူ ညွန်တဲ့အတိုင်း လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ အတော်လေး ထိရောက်မှုရှိတာ တွေ့ရတော့တယ်။ ကျွန်တော်တချက် ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဇင့်ခန္ဓာကိုယ်လေး ရှေ့ကိုလွင့်လွင့်သွားတော့ ဒုတ်က လွတ်ထွက်သွားသလို ခံစားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ... ဒီပုံစံက တချက် အားနဲ့ ဆောင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေက ဇင့်ပခုံးကို ပြန်ဆွဲထားလိုက်တော့ ဆောင့်ချက်တိုင်း အထိရောက်ဆုံးလို့ ခံစားရသလို တချက်တချက် ဥပါ ၀င်သွားမလားတောင် ထင်ရတယ်။ အတော်ကောင်းတဲ့ လုပ်ပုံပဲလို့ စိတ်ထဲ မှတ်ထားလိုက်တယ်။ ဇင် ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး ...
“မြန်မြန်လုပ်တော့လေ ကိုကြီးရယ် ...ပူ နေပြီ...” တဲ့...
ဇင့်ကိုတချက်စိုက်ကြည့်ပြီး ဇင့်ပုခုံးကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကိုင်ခါ ဆောင့်ချက်တိုင်း ပြန်ဆွဲဆောင်လိုက်တာ တချက်ဆောင့်လုပ်တိုင်း နှစ်ခါ ဆောင့်ရသလိုဖြစ်တာကြောင့် ဇင့်မှာ မျက်လုံးပြူး ပါးစပ်ကလည်း ငြီးငြူရင် ကျွန်တော့်လက်တွေကို အတင်းဖြုတ်လာတော့ ကျွန်တော်အဖြုတ်မခံ သူ အတင်းကုန်းထလာလို့ သူပခုံးတင်မက သူ့လည်ပင်းအောက်ကိုလျှိုပြီး ကျွန်တော့် လက်နှစ်ဖက်အခြင်းခြင်း ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ရှိသမျှအားကုန် ဆောင့်ချလိုက်ရာ အချက်ပေါင်း များလာတာနဲ့ အမျှ ကျွန်တော်လည်း ပြီးချင်လာတော့သည်။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံး အင်အားနဲ့ အားကုန်ဆောင့် လိုက်ရာ ဒုတ်ထဲမှသုတ်တွေဇင်ရဲ့ ရွှေခရုထဲ ပန်းထည့်လိုက်ပြီး ဇင့်ကိုယ်ပေါ်သို့ လှဲချလိုက်ပါတော့တယ်....။
လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၄) ဆက်ဖတ်ရန် »